Sing Swim Sway.....: 06/2007
Ref - Weekly Eleven Journal June 2007
ကော့သောင်းမှတစ်ဆင့် ထိုင်း နိုင်ငံသို့ရေထွက်ကုန်များတင်ပို့ရာ တွင် ဇွန်လ ၁ ရက်နေ့မှစ၍ ပုံမှန် ကုန်သွယ်ရေးစနစ်ဖြစ်သည့် LC/TT စနစ်ဖြင့်သာတင်ပို့ရန် သတ် မှတ်ခဲ့ကြောင်းနှင့်ယင်းကဲ့သို့ သတ် မှတ်ပြီးသည့်နောက်ကုန်သွယ်မှုပမာ ဏလျော့ကျသွားခဲ့ကြောင်း မြန်မာ နိုင်ငံငါးလုပ်ငန်းအဖွဲ့ချုပ် အပတ်စဉ် အစည်းအဝေးမှသတင်းရရှိသည်။
သို့သော် ဖြစ်ရိုးဖြစ်စဉ် တစ် ခုသာဖြစ်၍ ကုန်သွယ်မှုမှာ မကြာမီ ပြန်လည်သွက်လက်လာမည်ဖြစ် ကြောင်းနှင့် ယခင်မူဆယ်နယ်စပ် ကုန်သွယ်ရေးအား ပုံမှန်ကုန်သွယ် ရေးစနစ်သို့ပြောင်းလဲစဉ်ကလည်း ယင်းကဲ့သို့လတ်တလောကျဆင်းမှု မျိုးကြုံတွေ့ခဲ့ရသည်ဟု မြန်မာ နိုင်ငံ ရေထွက်ပစ္စည်းထုတ်လုပ်သူများနှင့် ပို့ကုန်လုပ်ငန်းရှင်များအသင်းတာ ဝန်ရှိသူကတင်ပြသွားသည်။
""ဇွန်လဆန်းက ကော့သောင်း ကတစ်ဆင့် ထိုင်းနိုင်ငံကို ရေထွက် ပစ္စည်းတင်ပို့မှုကိုLC/TT စနစ်နဲ့ ပြောင်းတင်ပို့တယ်။ အရင်ကတစ် လအမေရိကန်ဒေါ်လာတစ်သိန်းဝန်း ကျင်တင်ပို့နေရာကအခုလေးသောင်း ကျော်လောက်ပဲတင်ပို့မှုရှိတော့တယ်။ အရင်ကမြန်မာကျပ်ငွေနဲ့ အခုက ပုံမှန်ကုန်သွယ်ရေးစနစ်အရနိုင်ငံခြား ငွေနဲ့ပဲရောင်းရတယ်။ ဒါပေမယ့် မ ကြာခင်ပြန်ပြီးသွက်လက်လာဖို့ရှိပါ တယ်။ အရင်မူဆယ်ကို ပုံမှန်ကုန် သွယ်ရေးစနစ်စပြောင်းတုန်းကလည်း ဒီလိုပဲလျော့ကျခဲ့ဖူးပါတယ်""ဟု ရှင်း လင်းတင်ပြသွားသည်။
ဒုတိယကမ္ဘာစစ်ပြီးကာလ မှာ မြန်မာနိုင်ငံကို လွတ်လပ်ရေး ပေးဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့တဲ့ ဗြိတိသျှဝန် ကြီးချုပ်ကလီမင့်အက်တလီ (Cle m ent Rich ard Attlee, 1883-1967) ရဲ့ကိုယ်တိုင်ရေးအတညုပဍ္ဎတ္တိစာအုပ် တစ်အုပ် မိတ်ဆွေတစ်ယောက်ဆီ ကလက်ဆောင်ရတယ်။ စာအုပ် ကနည်းနည်းတောင် ပိုးကိုက်နေ ပြီ။ စာအုပ်ခေါင်းစဉ်က "As It Happened" တဲ့။Odhams Press Limited London ကထုတ်ဝေ တယ်။ ထုတ်ဝေနှစ် ရှာမတွေ့ဘူး။
အက်တလီဟာ မြန်မာနိုင်ငံ နဲ့ပတ်သက်ခဲ့တဲ့ ဗြိတိသျှနိုင်ငံရေး ခေါင်းဆောင် လေဘာပါတီရဲ့ဝန် ကြီးချုပ်ဖြစ်တယ်။ ဗိုလ်ချုပ် အောင်ဆန်း ဘိလပ်သွားပြီး လွတ် လပ်ရေးဆွေးနွေးခဲ့တဲ့ ခရီးစဉ်မှတ် တမ်းမှာ အက်တလီနဲ့ ဗိုလ်ချုပ် အောင်ဆန်း ရင်းရင်းနှီးနှီး ယှဉ်တွဲ လျက်ဓာတ်ပုံတွေငယ်ငယ်ကတည်း က တွေ့မြင်နေခဲ့ရလို့ သူ့ရုပ်ပုံကို မျက်စိယဉ်နေတယ်။ ""အောင်ဆန်း -အက်တလီစာချုပ်"" ဆိုတာကို လည်း နားယဉ်နေခဲ့တယ်။ သူ့အတညုပဍ္ဎတ္တိ ဖတ်ကြည့် တော့လည်း အက်တလီဟာ တ ကယ့်လူကြီးလူကောင်း၊ ယဉ် ကျေးတဲ့ နိုင်ငံရေးသမားကြီး တစ် ယောက်ဆိုတာ သိရတယ်။ ၁၉၃၅ မှာ သူလေဘာပါတီခေါင်းဆောင် ဖြစ်လာတယ်။ ၁၉၄၂မှာ ချာချီရဲ့ 0x150ွန့်ပေါင်းအစိုးရမှာ ဒုတိယ ဝန်ကြီးချုပ်ဖြစ်ခဲ့တယ်။ ၁၉၄၅ရွေး ကောက်ပွဲကျတော့ သူ ဦးဆောင် တဲ့ လေဘာပါတီဟာ မဲအပြတ် အသတ်နိုင်ခဲ့လို့ အက်တလီ ဝန် ကြီးချုပ်ဖြစ်လာတယ်။ သူ့လက် ထက်မှာ ဒုတိယကမ္ဘာစစ်ပြီးချိန် လွတ်လပ်ရေးတောင်းဆိုလာကြတဲ့ ကိုလိုနီနိုင်ငံတွေကို လွတ်လပ်ရေး ပေးဖို့ နိုင်ငံခြားရေးမူဝါဒချမှတ် ခဲ့ပြီး နိုင်ငံအတော်များများကို လွတ်လပ်ရေးပေးခဲ့တယ်။ အဲဒီ အထဲ မြန်မာနိုင်ငံလည်း ပါဝင်ခဲ့ တာဖြစ်တယ်။ နု-အက်တလီ စာ ချုပ် ချုပ်ဆိုတာသမိုင်းဝင်နာမည် တစ်ခုပဲ�မဟုတ်ပါလား။ အက်တလီ ကိုယ်တိုင်ရေး အတညုပဍ္ဎတ္တိမှာမြန်မာနိုင်ငံအကြောင်း သူ ဘယ်လိုအမြင်နဲ့ ရေးခဲ့သလဲ လို့ ဖတ်ကြည့်တယ်။ အခန်း(၁၁) ""ဓနသဟာယဆက်ဆံရေး""ဆိုတဲ့ အခန်းမှာ နှစ်မျက်နှာ၊ သုံးမျက်နှာ လောက် ထည့်ရေးထားတာတွေ့ရ တယ်။ အက်တလီက အိန္ဒိယကို လွတ်လပ်ရေးပေးပြီးရင်ဓနသဟာယ အဖွဲ့ထဲမှာ ဆက်လက် ပါဝင်နေ စေဖို့ ကြိုးစားခဲ့တဲ့အကြောင်း ရေး တယ်။ အိန္ဒိယက သမ္မတနိုင်ငံ တည်ထောင်ချင်တယ်။ ဓနသဟာ ယအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေက �နိုင်ငံ ဥသျှောင်အဖြစ် ဗြိတိသျှရွှေနန်း သခင်ကိုသတ်မှတ်ရတယ်။ နောက် ဆုံးတော့ အိန္ဒိယက သမ္မတနိုင်ငံ ဖြစ်သော်လည်း�ဓနသဟာယ ဥသျှောင်အဖြစ် ဗြိတိသျှထီးနန်း ကို အသိအမှတ်ပြုဖို့ လက်ခံတဲ့ အတွက် လွတ်လပ်ရေးယူပြီးချိန် မှာ ဓနသဟာယအဖွဲ့ဝင်အဖြစ် ဆက်နေခဲ့တယ်။ မြန်မာနိုင်ငံကိုလည်း လွတ် လပ်ရေးရပြီးချိန်မှာ ဓနသဟာယ အဖွဲ့ဝင်အဖြစ် ဆက်လက်တည်ရှိ ဖို့ အက်တလီတို့က ကြိုးစားခဲ့တဲ့ အကြောင်း စာမျက်နှာ ၂၁၈-၂၁၉ မှာ အောက်ပါအတိုင်းဖော်ပြခဲ့ တာ မှတ်သားစရာ ကောင်းပါ တယ်။ ""မြန်မာနိုင်ငံ င်္ပြံနာက အိန္ဒိယနှင့်မတူ ကွဲပြားခြားနား သည်။ ကဋ္ဋန်ုပ်သည် ဆိုင်မွန်ကော် မရှင်နှင့် မြန်မာနိုင်ငံသို့ သွား ရောက်ခဲ့ဖူးသည်။ မြန်မာနိုင်ငံကို အိန္ဒိယထဲက ခွဲခြမ်းပေးခဲ့သည်မှာ ကဋ္ဋန်ုပ်တို့ ကော်မရှင်၏ ထောက်ခံ တင်ပြချက်အရဖြစ်သည်။ စစ်ကြီး မတိုင်မီ မြန်မာတို့သည် ကိုယ်ပိုင် အုပ်ချုပ်ရေးအတွေ့ အကြုံရခဲ့ကြ ပြီးဖြစ်သည်။ သို့သော် အနောက် တိုင်းပညာရေးရှိသူ မြန်မာများ အလွန်နည်းပါးပြီး အုပ်ချုပ်ရေး ပိုင်းတွင်လည်း များများစားစား မရှိခဲ့ချေ။ မြန်မာနိုင်ငံတွင် အိန္ဒိယမှာ ကဲ့သို့ ဟင်ဒူ-မူဆလင်လူမျိုး အရေးင်္ပြံနာမျိုးမရှိသော်လည်း ခေတ်နောက်ကျလွန်းခြင်းနှင့် လူ မျိုးစုင်္ပြံနာအချို့ကား ရှိနေခဲ့ သည်။ မြန်မာနိုင်ငံသည် ဂျပန်တို့ ၏ကျြးကျော်သိမ်းပိုက်ခြင်းကို ခံခဲ့ရပြီး ကာလရှည်ကြာ ခက်ခက် ခဲခဲ ပြန်လည်တွန်းလှန်ပြီးမှအောင် မြင်မှုရရှိခဲ့သည်။ မြန်မာအချို့ သည် ဂျပန်က လွတ်လပ်ရေး တကယ်ပေးလိမ့်မည်ဟုယုံကြည်၍ ဂျပန်နှင့်ပူးပေါင်းခဲ့ပြီး ဒေါက်တာ ဘမော် ရုပ်သေးအစိုးရကိုထောက် ခံခဲ့ကြသည်။ သို့သော်သူတို့သည် မကြာမီအမြင်မှန်ရခဲ့ကြပြီး အောင် ဆန်း၏ ဦးဆောင်မှုအောက်ရှိ လူငယ်များကတော်လှန်ရေးဆင်နွှဲ ကြသည်။ ဗြိတိသျှတပ်များနှင့် သူတို့အဆက်အသွယ်ရခဲ့ကြသည်။ လော့ဒ်မောင့်ဘက်တန်၏ အမြော် အမြင်ကြီးမားသောမူဝါဒ၏ ကျေး ဇူးဖြင့် သူတို့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက် ကြပြီး ကျြးကျော်သူများအား မောင်းထုတ်ခဲ့ကြသည်။ မြန်မာနိုင်ငံကို ပြန်ရပြီး နောက် အိန္ဒိယရှိ ဆာရယ်ဂျီနယ် ဒေါ်မန်စမစ်�လက်အောက်ခံ(မြန်မာ) ပြည်ပြေးအစိုးရကို ပြန်လည် အသက်သွင်းခဲ့ကြ၏။ ဆာဒေါ်မန် စမစ်ထံ၌ နိုင်ငံရေးသမား လက် ဟောင်းကြီး အချို့ရှိနေသည်။ စစ် ကြီးမတိုင်မီက မြန်မာနိုင်ငံတွင် ရှိခဲ့ဖူးသော တစ်စိတ်တစ်ပိုင်း ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ရေးမျိုးကို အချိန် မတိုင်မီ ပြန်လည်ဖော်ထုတ်ခဲ့ခြင်း မှာ ကဋ္ဋန်ုပ်တို့၏ အမှားဖြစ်သည်။ နိုင်ငံရေး လက်ဟောင်းကြီး များသည် မြန်မာနိုင်ငံ၌ ကြီးထွား လာနေသော အမျိုးသားရေးလှုပ် ရှားမှုကြီးနှင့် ကင်းကွာနေကြချိန် တွင် တော်လှန်ရေးသမား လူငယ် များက စိတ်မရှည်နိုင်တော့ချေ။ နောက်ဆုံးတွင် ကဋ္ဋန်ုပ်သည် မြန်မာများက ကောင်းစွာနှစ်သက် လက်ခံသော၊�မြန်မာနိုင်ငံအကြောင်း လည်း ကောင်းကောင်းသိသူ ဆာ ဟူးဘတ်ရန့်စ်ကိုဘုရင်ခံခန့်လိုက် သည်။ ထို့နောက် မြန်မာနိုင်ငံမှ နိုင်ငံရေးပါတီများ၏ ကိုယ်စား လှယ်များပါဝင်သော အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ လန်ဒန်သို့လာပြီးမြန်မာ့နောင်ရေး ဆွေးနွေးကြရန် ဖိတ်ခေါ်လိုက် သည်။ သူတို့နှင့်ကဋ္ဋန်ုပ်တို့ အချိန် ကြာမြင့်စွာဆွေး နွေးဖလှယ်ခဲ့ကြ သည်။ သူတို့ထဲက အချို့သည် စစ်ကြီးမတိုင်မီကခရစ်ပ်စ်(Chipps)နှင့် သိကဋ္ဋမ်းခဲ့ကြပြီးဖြစ်၍ များစွာ အဆင်ပြေခဲ့သည်။ သို့သော်ကဋ္ဋန်ုပ် တို့က မြန်မာပြည်သူများ၏ ရွေး ချယ်မှုကိုလက်ခံရန်အသင့်ရှိသည် ဟုပြောဆိုခြင်းကို ပထမတွင် သူတို့မယုံကြည်နိုင်ကြဘဲသံသယ ရှိနေခဲ့ကြသည်။ ဖြစ်ချင်တော့ သူတို့သည် လုံးဝလွတ်လပ်ရေးရယူပြီးသမ္မတ နိုင်ငံထူထောင်မည်ဟု သူတို့၏ နောက်လိုက်များထံ ကတိကဋ္ဋံထား ခဲ့ကြလေပြီ။ သူတို့သည် ကွန်မြ နစ်ပါတီကိုလည်း ရင်ဆိုင်နေကြ ရ၏။ ဆွေးနွေးပွဲများ ဆက်ပြုလုပ် နေရင်း သူတို့ထဲက အချို့(အထူး သဖြင့်သူတို့၏ခေါင်းဆောင်ခေါင်း မာသူတစ်ဦးဖြစ်သောအောင်ဆန်း) သည် ဓနသဟာယထဲတွင် ဆက် နေသင့်သည်ဟု သဘောပေါက်စ ပြုလာသည်။ သမ္မတနိုင်ငံ ထူ ထောင်သော်လည်း အိန္ဒိယကဲ့သို့ ပင် ဓနသဟာယထဲတွင်ဆက် နေနိုင်သည့် လမ်းကြောင်းကို သဘော ကျကြသည်။ ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ဝင်များ သည် အလွန်ငယ်ရွယ်ပြီး အတွေ့ အကြုံနုနယ်သူများဖြစ်ကြ၏။ လူနည်းစုပါတီတစ်ခု၏ ကိုယ်စား လှယ်ဖြစ်သူ ဦးစောကမူ သူတို့နှင့် မတူချေ။ သူ့ကို စစ်ကြီးမတိုင်မီက ကဋ္ဋန်ုပ်တွေ့ခဲ့ဖူးသည်။ စစ်ကြီးအ တွင်း သူအင်္ဂလန်သို့လာရောက် သည်။ သို့သော် ဦးစောသည် ဂျာမန်များနှင့်လစ္စဘွန်းတွင်အဆက် အသွယ်လုပ်ရန်ကြိုးစားခဲ့ကြောင်း ပေါ်ပေါက်လာ၍ အကျယ်ချုပ်ဖြင့် ထားရှိခဲ့ရသည်။ သူသည် ပြုံးပြုံး လေးနှင့်ဆိုးမည့်သူဟု ကဋ္ဋန်ုပ် ထင် မြင်ယူဆခဲ့သည်။ ကဋ္ဋန်ုပ်နှင့်ဇနီးက အောင်ဆန်း တို့တစ်ဖွဲ့လုံးကို နေ့လယ်စာဖြင့် ဧည့်ခံခဲ့ရာ ကဋ္ဋန်ုပ်၏ဇနီး သည် လူသတ်သမားဖြစ်မည့်သူနှင့်သူ၏ သားကောင်ဖြစ်မည့် သူများအား ဧည့်ခံကေဋ္ဋးမွေးနေ ခြင်းပါတကား ဟု စိုးစဉ်းမျှတွေးမိမည် မဟုတ် ချေ။ သူတို့ မြန်မာပြည် ပြန်သွား ကြပြီး များမကြာမီအောင်ဆန်းနှင့် သူ့လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်ဝန်ကြီးများ သည် ဦးစော၏ သတ်ဖြတ်ခြင်း ခံကြရသည်။ ဘုရင်ခံ၏ လက် မြန်ခြေမြန်အရေးယူမှုကြောင့် ဦးစော၏အကြံ မအောင်မြင်ခဲ့ချေ။ သခင်နုသည်ဝန်ကြီးချုပ်ဖြစ်လာပြီး ဦးစောသည်တရားဥပဒေရှေ့မှောက် သို့ ရောက်သွားခဲ့၏။ သို့သော် မြန်မာနိုင်ငံထိုးနှက်ခံခဲ့ရသည်မှာ ကား ပြင်းထန်လှသည်။ သို့သော် မြန်မာတို့က လုံးဝ လွတ်လပ်ရေးယူရန် ဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြ သည်။ ကဋ္ဋန်ုပ်တို့၏ အခြေခံမူများ နှင့်အညီ ကဋ္ဋန်ုပ်တို့အနေဖြင့် သူတို့ ၏တောင်းဆိုချက်ကို ခွင့်ပြုရန်မှ တစ်ပါး အခြားမရှိချေ။ ထိုအချိန်ကစ၍ မြန်မာ အစိုး ရသည် ကွန်မြနြစ်များနှင့် အခြား အဖွဲ့များ၏ သူပုန်ထမှုများနှင့် ရင်ဆိုင်ခဲ့ကြရပါတော့သည်။ � � � မစ္စတာ အက်တလီရဲ့ မြန်မာ နိုင်ငံအပေါ်ထင်မြင်ချက်ကိုဖတ်ပြီး နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံရဲ့သမိုင်းအလှည့် အပြောင်း သဘာဝလေးတွေကို သင်ခန်းစာယူတဲ့စိတ်၊ သံဝေဂ ယူတဲ့စိတ်နဲ့ စဉ်းစားနေမိ ပါ ကြောင်း . . . ။
Labels: History - Politics, Ideas - Opinions, နိုင်ငံရေး
တက္ကသိုလ် ကေဵာင်းသားမဵား သပိတ်၊ ဒုတိယ (၁၉၃၆) and The Hell-Hound at Large
တက္ကသိုလ် ကေဵာင်းသားမဵား သပိတ်၊ ဒုတိယ (၁၉၃၆)
Aung Kyaw Myo မြ — နောက်ဆုံူးပြူပင်မမြ်းမံခဲ့တဲ့ နေႚစြဲနဲႚ အခဵိန် 2007-05-05 19:55
၂၀၀၀ ခိုံစြ် တတိယ အဋ္ဌကိမ်ထုတ် တက္ကသိုလ်မဵား သမိုင်း သုတေသန ဌာန၊ ဂဵီအီးစီ (ပညာရေး) သမဝၝယမ အသင်းက ထုတ်ဝေတဲူ့မဟန်ရဲႚ 'ကိုလိုနီခေတ်ူမန်မာ့ သမိုင်း အဘိဓာန်' မြ "တက္ကသိုလ် ကေဵာင်းသားမဵား သပိတ်၊ ဒုတိယ (၁၉၃၆)" ကိုပန်လည် ကူးယူ ဖော်ူပတာူဖစ်ပၝတယ်။
ဒုတိယ တက္ကသိုလ် ကေဵာင်းသားမဵား သပိတ်သည် ၁၉၃၆ ခိုံစြ် ဖေဖော်ဝၝရီလ ၂၅ ရက် နေႚတငြ် စတင်ူဖစ်ပြား ခဲ့သည်။ သပိတ် ပေၞပေၝက်ရသည့် ႟ုတ်တရက် အေုကာင်းရင်ိးံစ်ြရပ်မြာ ထိုစဉ်က တက္ကသိုလ် ကေဵာင်းသားမဵား သမဂ္ဂ ဥက္ကှူ ကိုိုံကို တက္ကသိုလ်မြ ထုတ်ပယ် လိုက်သည့်ူပင် အိုးဝေ မဂ္ဂဇင်း တာဝန်ခံ အယ်ဒီတာ ကိုအောင်ဆန်း ကိုလည်း တက္ကသိုလ် အာဏာပိုင် တိုႚက တက္ကသိုလ်မြ ထုတ်ပစ်သည် ဆိုသည့် သတင်း မဵားေုကာင့်ူဖစ်သည်။ ကိုိုံကို တက္ကသိုလ်မြ ထုတ်ပစ် ရသည့် နောက်ခံ အေုကာင်းမြာ ဤသိုႚူဖစ်သည်။ ကိုိုံကို တက္ကသိုလ် ကေဵာင်းသားမဵား သမဂ္ဂ ဦးစီး၍ ၁၉၃၅ - ၃၆ ခု ပညာသင်ိံစြ် အတကြ် စကားရည် လုပြဲကို ၁၉၃၆ ခိုံစြ် ဇန်နဝၝရီလ ၃၁ ရက်နေႚတငြ် ကဵင်းပသည်။ ထိုအခမ်းအနားတငြ် ရန်ကုန် တက္ကသိုလ် ကေဵာင်းသားမဵား သမဂ္ဂ ဥက္ကှူ ကိုိုံက မိန်ႚခနြ်းေူပာသည်။ မိန်ႚခနြ်းတငြ် တက္ကသိုလ် အာဏာပိုင် အခဵြိႚက ကေဵာင်းသူ ကေဵာင်းသား မဵား၏ ကိုယ်ရေး ကိုယ်တာ မဵားတငြ် ဝင်ရောက် စက်ြဖက် နေပုံကို ထည့်သငြ်းေူပာုကား ခဲ့သည်။ ထို အူဖစ်အပဵက်ူဖစ်ပြား္ဘပီး မုကာမီ တက္ကသိုလ် ကေဵာင်းသားမဵား သမဂ္ဂမြ ထုတ်ဝေသည့် အိုးဝေ မဂ္ဂဇင်း အမတြ် ၁ ထက်ြလာသည်။ မဂ္ဂဇင်း အယ်ဒီတာထံ ပေးစာ အခန်းတငြ် ယမမင်း အမည်ခံသူ အိုးဝေ ဦးညြိူမ၏ "ငရဲခြေးဋ္ဌကီး လတ်္ဘြပီး သရမ်း နေသည်" (The Hell Hound At Large) ခေၝင်းစဉ်ပၝ ပေးစာ တခု ပၝသည်။ ပေးစာ၏ အခဵပြ် သဘောမြာ အရင်းရငြ် နယ်ခဵဲႚ၏ လက်ကိုင်ဒုတ်ူဖစ်္ဘပီး အဝီစိသိုႚ ရောက်လာသော ခြေးနက်ဋ္ဌကီး တကောင်သည် အဝီစိမြ လတ်ြထကြ် သြားကာ လူႚူပည်တငြ် အထူးသူဖင့် တက္ကသိုလ် နယ်ေူမတငြ် သောင်းကဵန်း နေသောေုကာင့် တြေႚရြိသူက ခြေးနက်ဋ္ဌကီးကို အဝီစိသိုႚ အူမန်ူပန်ပိုႚရန်ြိံးဆော်ထာူးခင်ူးဖစ်သည်။ ခြေးနက်ဋ္ဌကီး ဆိုသည်မြာ မဵြိးခဵစ် ကေဵာင်းသား မဵားကို ဖြိံပ်သော တက္ကသိုလ် အာဏာပိုင် တဦးကို ရည်င်္ီနြ်းသည်ဟု ဆိုလေသည်။ ထိုႚေုကာင့် အထက်ပၝ ပေးစာ ရေးသူ ယမမင်း ဆိုသူကို ဖော်ထုတ် ပေးရ မည်ဟု တက္ကသိုလ် ကေဵာင်းအုပ်ဋ္ဌကီးက တောင်းဆိုသည်။ အိုးဝေ မဂ္ဂဇင်း တာဝန်ခံ အယ်ဒီတာ ကိုအောင်ဆန်းက စာနယ်ဇင်း တိုႚ၏ ထုံးစံ အရ ယမမင်း ဆိုသူကို ထုတ်ဖော် မေူပိာုိံင်ေုကာင်း အေုကာင်ူးပန်ုကား ခဲ့သည်။
Escaped from Awizi,adevil in the form ofablack dog. Had been during his brief span on earthabase object of universal odium and execration, - sentenced to Eternal Damnation for Treachery, Theft, Presumption, Intrigue, Pettifogging, Sadism, Churlishness, Vulgarity, etc. A pimping knave with avuncular pretensions to some cheap wiggling wenches formawell-known Hostel, he was alsoahectic popularity-hunter, shamming interest in Games, Concerts, Associations etc., meanacing the public placed with his unwanted presence though generally welcomed everywhere as small-pox. His only distinguishing marks have been the abominable V.D. ulcers on his neck and buboes due to copulation with his own wife.
From: "OWAY" or The Voice of the Peacock, Voice of the RUSU, Jan. 1936; Vol. 5
No. 1, p. 56. Points from Letters.
ဤ အူဖစ်အပဵက်မဵာူးဖစ်္ဘပီးနောက် တက္ကသိုလ် ကေဵာင်းသားမဵား သမဂ္ဂ ဥက္ကှူ ကိုိုံအား တက္ကသိုလ်မြ ထုတ်ပယ် လိုက်သည့် စာကို ၁၉၃၆ ခိုံစြ် ဖေဖော်ဝၝရီလ ၂၁ ရက်နေႚတငြ် ကိုိုံက လက်ခံ ရရြိ ခဲ့သည်။ ကိုအောင်ဆန်း ကိုလည်း တက္ကသိုလ်မြ ထုတ်ပယ် တော့မည် ဆိုသည့် သတင်း မဵားလည်း ထက်ြလာသည်။ ကိုအောင်ဆန်းကို တက္ကသိုလ်မြ ထုတ်ပယ်သည့် အမိန်ႚစာ တရားဝင် ထက်ြမလာ သော်လည်း တက္ကသိုလ် အာဏာပိုင် တိုႚက ကိုအောင်ဆန်းကို တက္ကသိုလ်မြ သုံိးံစြ် ထုတ်ပယ်ရန် ဆုံူးဖတ် ထားသည်မြာ အမနြ်ူဖစ်ေုကာင်း နောင်တငြ် သိရသည်။ ထိုႚေုကာင့် ကိုိုိံငြ့် ကိုအောင်ဆန်း တိုႚအား ကေဵာင်းထုတ်သည့် ကိင်္စ ဆြေးြေိံးရန် ၁၉၃၆ ခိုံစြ် ဖေဖော်ဝၝရီလ ၂၃ ရက်နေႚတငြ် တက္ကသိုလ် ကေဵာင်းသားမဵား သမဂ္ဂ အမဆြောင် အစည်းအဝေး ကဵင်းပသည်။ အမဆြောင် အစည်းအဝေး ကဵင်းပ္ဘပီးနောက် ၁၉၃၆ ခိုံစြ် ဖေဖော်ဝၝရီလ ၂၅ ရက်နေႚတငြ် ကေဵာင်းသားထု အစည်းအဝေး ကဵင်းပရာ ၈၀၀ ခန်ႚ ရြိသော ကေဵာင်းသားထုမြာ တက္ကသိုလ် အာဏာပိုင် တိုႚ၏ ဖြိံပ် ခဵပ်ြခဵယ်မြ မဵားကို မကေဵမနပ်ူဖစ်္ဘပီး သပိတ် မြောက်ုက တော့သည်။ သပိတ် ႟ုံးခန်းမြာေ႟တြိဂုံ ဘုရား အနီးရြိ မော်လ္ဘမိငြ် ဇရပ်ူဖစ်သည်။ ၁၉၃၆ ခု ဖေဖော်ဝၝရီလ ၂၆ ရက်နေႚတငြ် ကိုအောင်ဆန်း အပၝအဝင် သပိတ်မြောက် ကောင်စီဖြဲႚ္ဘပီးသော အခၝ ယင်း ကောင်စီက သပိတ်ကို ဋ္ဌကီုးကပ် ပေးသည်။ ထိုႚနောက် ရန်ကုန်ိံငြ့်တကြ တိုိံင်ငံ လုံးရြိ အထက်တန်း ကေဵာင်းသား အမဵားစု ကလည်း လိုက်၍ သပိတ် မြောက်ုက သူဖင့် အထေထြေ ကေဵာင်းသားမဵား သပိတ် အသင်ြသိုႚ ကူးေူပာင်း သြားသည်။
တက္ကသိုလ် ဥပဒေ အခဵြိႚိံငြ့် တက္ကသိုလ် ပညာရေး၏ ခဵြိႚယငြ်းခဵက် အခဵြိႚကိုပင်ဆင် ပေးရန် အပၝအဝင် တောင်းဆိုခဵက် ၁၂ ခဵက်ကို သပိတ်မြောက် ကောင်စီက တက္ကသိုလ် အာဏာပိုင် မဵားထံ တင်ူပ တောင်းဆို ခဲု့ကသည်။ ထိုႚေုကာင့် အစိုးရ ဘက်မြ ဒုတိယ အဓိပတိ ဦးဆက် ခေၝင်းဆောင်သော တက္ကသိုလ် သပိတ် စုံစမ်းရေး ကော်မတီိံငြ့် ဆာူမဘူး ဥက္ကှူ အူဖစ် ဆောင်႟က်ြသော တက္ကသိုလ် ဥပဒေူပင်ဆင်ရေး အဋ္ဌကံ ပေးမည့် ကော်မတီ တခုကို ဖြဲႚစည်း ပေးခဲ့သည်။ ဤသိုႚူဖင့် ၁၉၃၆ ခု မေလ ၁၀ ရက်နေႚတငြ် သပိတ် လန်ြခဲု့ကသည်။
ဤ သပိတ်ူဖစ်ပေၞ စေသည့် ႟ုတ်တရက် အေုကာင်းရင်းမြာ ကိုိံငြ့် ကိုအောင်ဆန်း တိုႚကို တက္ကသိုလ် အာဏာပိုင် တိုႚက ကေဵာင်းထုတ်ရာမြ စသော်လည်း အေူခခံ အေုကာင်းရင်း မြာမူ မဵြိးခဵစ်စိတ်၏ လြႚံဆော်မြေုကာင့် ကိုလိုနီ ပညာရေး၊ ကိုလိုနီ အုပ်ခဵပ်ြရေိးံငြ့် နယ်ခဵဲႚ အရင်းရငြ် စနစ် တိုႚကို မကေဵနပ်၍ူဖစ်သည်။ တနည်း ဆိုရလ္တွင် အမဵြိးသား ပညာရေိးံငြ့် အမဵြိးသား လတြ်ေူမာက်ရေး အတကြ် တိုက်ပြဲဝင်ူခင်ူးဖစ်သည်။ိုိံင်ငံ လတ်ြလပ်ရေး အတကြ် ကေဵာင်းသားထု၏ိုိံင်ငံရေိးုိံုးကားမြ တိုးတက် လာသည်ကိုပသည့် သပိတ်ူဖစ်သည်။ လတ်ြလပ်ရေး ဋ္ဌကြိးပမ်းမသြည် ကေဵာင်းသားထု အတငြ်း နက်႟ြိင်းစြာ စီးဝင် လပ်ြရြားစူပလြာေုကာင်း ကိုလည်း သိရသည်။ ဤ သပိတ်ကို အေုကာင်ူးပြ၍ ပထမ အဋ္ဌကိမ်ေူမာက်ူမန်မိာုိံင်ငံလုံး ဆိုင်ရာ ကေဵာင်းသားထု အစည်းအဝေးဋ္ဌကီး ကဵင်းပိုိံင်္ဘပီး ဗမိာုိံင်ငံလုံး ဆိုင်ရာ ကေဵာင်းသားမဵား သမဂ္ဂကို တည်ထောင်ိုိံင်ခဲု့ကသည်။ ထိုႚနောက်ူမန်မိာုိံင်ငံ အြိံႚ၌ ကေဵာင်းသား သမဂ္ဂမဵား ပေၞပေၝက် လာသည့် အတကြ် ကေဵာင်းသားထု ပိုမို ရင်ြးီံး လာခဲု့ကသည်။ ကေဵာင်းသာိးံငြ့်ူပည်သူ အတူ တြဲ၍ လတ်ြလပ်ရေး တိုက်ပြဲ ဝင်ခဲု့ကသည်။ ထိုႚေုကာင့် ပညာရေိးံငြ့် ကေဵာင်းသားရေးရာ မဵားတငြ် တောင်းဆိုခဵက်မဵား အူပည့်အဝ မရ သော်လည်း အမဵြိးသား လတြ်ေူမာက်ရေး ႟ဒြေၝင့်မြုကည့်လ္တွင်ိုိံင်ငံ အတကြ် အူမတ် ထက်ြသော သပိတ်ဟု ဆိုိုိံင်သည်။
၂၀၀၅ ခု မေလထုတ် သီဟရတနာ အုပ် ၁၀၀ူပည့် အထူးထုတ် '၂၀ ရာစုမန်မာ ဝတဉတြို ၁၀၀၊ စာရေးဆရာ ၁၀၀' စာအုပ်မြ ဖေူမင်ရဲႚ "ူဖစ်ခဵင်လနြ်းသူ" ကို ကူးယူ ဖော်ူပတာူဖစ်ပၝတယ်။
လန်ြခဲ့သေိာံစ်ြပေၝင်ိးံစ်ြဆယ်ကေဵာ် ကိုလထြနြ်ိးံငြ့် ကဋ္ဋန်တော် စတြေႚုကတော့ ကဋ္ဋန်တော်က အသက် ဆယ့်ေူခာက်ိံစြ်၊ ဆယ်တန်း စာမေးပြ္ဘဲပီးလိုႚ ကေဵာင်းပိတ် ထားတုန်း။ သူက အသက်ိံစ်ြဆယ် သာသာခန်ႚ ရြိမည်။ လူက ကဵားကဵားလဵားလဵား၊ ထြားထြားကဵြိင်းကဵြိင်း မဟုတ်ပၝ။ ႟ြိး မကောင်းပၝ။ မိန်းမတြေ ကဵလောက်သည့် ႟ုပ်မဵြိးလည်း မဟုတ်ပၝ။ အရပ် ခပ်ပဵပ်ပဵပ်၊ ကတုံး ဆံတောက်ိံငြ့် သူလို ငၝလိုထက် နည်းနည်း ညံ့သော႟ုပ်ူဖစ်သည်။ အလယ်ြတကူ အာူးဖင့်ေူပာလ္တွင်တော့ ဘုန်းဋ္ဌကီး ကေဵာင်းသား႟ုပ် ပေၝက်သည်ဟု ကဋ္ဋန်တော် ဆိုခဵင်သည်။ စင်စစ် မြာလည်း သူက ဘုန်းဋ္ဌကီး ကေဵာင်းသား ပၝပဲ။ အသက်ိံစ်ြဆယ်လောက် ဆိုတော့ ဘုန်းဋ္ဌကီး ကေဵာင်းသား ႟ိုး႟ိုး မဟုတ်။ ခေၝင်းဆောင် အဆင့် ရောက်န္ဘေပီ။
ဘုန်းဋ္ဌကီး ကေဵာင်းသား ဆိုငား သူလို ငၝလို အိုံညာတ ဘုန်းဋ္ဌကီး ကေဵာင်းသား မဟုတ်၊ စာပေ ဗဟုသုတ လိုက်စားသော ဘုန်းဋ္ဌကီး ကေဵာင်းသာူးဖစ်သည်။ ညနေတိုင်ူးပန်ုကားရေး ဌာန စာဖတ်ခန်းသိုႚ သြားကာ သတင်းစာ ဖတ်လေ့ ရြိသည်။ ကဋ္ဋန်တော် ကလည်း သူတိုႚ ဘုန်းဋ္ဌကီး ကေဵာင်းနားက ရပ်ကက်ြမြာ နေသူ။ ညနေတိုင်းလည်း သတင်းစာ သြားဖတ်သူ ဆိုတော့ ကိုလထြနြ်ိးံငြ့် ရင်ြးီံး မိုကူခင်ူးဖစ်သည်။ ကိုလထြနြ်ိးံငြ့် ကဋ္ဋန်တော် သတင်းစာ ဖတ်ုကသည် ဆိုသော်လည်း သတင်းစာ ထဲက အေုကာင်းတြေ မဆြေးြေိံူးဖစ်ုကပၝ။ တခုဖစ်ိုံင်သည်။ အဲဒီတုန်းက ကဋ္ဋန်တော်ကူပန်ုကားရေးမြာူမန်မာ သတင်းစာတေထြက် နေးရငြ်းတိုႚ၊ ဂၝဒီယန် တိုႚကိုသာ ကောလင်း အဘိဓာန် ကလေး အားကိုးနဲႚ ဋ္ဌကြိးစား ပမ်းစား ဖတ်နေသည့် အခဵိန် ဆိုတော့ ဘုန်းဋ္ဌကီး ကေဵာင်းက လ္ဘာပီူးမန်မာ သတင်းစာ ဖတ်သည့် ကိုလထြနြ်းနဲႚ ကိုယ်နဲႚ အတန်း မတူလိုႚ သဘော ထားတာလည်ူးဖစ်ိုံင်သည်။
သိုႚသော် ဘာပဲူဖစ်ူဖစ် ကိုလထြနြ်ိးံငြ့် ခင်ခင်မင်မင် ရြိခဲ့ပၝသည်။ သူႚ အေုကာင်းတြေ ကဋ္ဋန်တော် စိတ်ဝင် စားသည်။ ဘုန်းဋ္ဌကီး ကေဵာင်းမြာ ကေဵာင်းသားဋ္ဌကီး အနေိံငြ့် သူယူရသည့် တာဝန်မဵား၊ လုပ်ပိုင်ခငြ့် အာဏာမဵား အေုကာင်း ဗဟုသုတ ရသည်။ ကေဵာင်းထိုင် ဆရာတော်ဋ္ဌကီး အပၝအဝင် ဦးပဥင်္င်းမဵား၊ ကိုရင်မဵာိးံငြ့် ဆက်ဆံရေး၊ ကေဵာင်းသားလေးမဵာိးံငြ့် ဆက်ဆံရေး ကိင်္စမဵား အေုကာင်းေူပာူပသည်။
ကေဵာင်းမြာ သူက အဆင်ေူပသည်။ အားလုံိးံငြ့် တည့်အောင် ပေၝင်းတတ်သည်။ တခုပဲ ရြိသည်။ ကိုရင်ဋ္ဌကီး ဦးသောဘိတ တယောက်တော့ သိူံငြ့် မဵက်ြိာံေုကာ သိပ်မတည့်။ ကိုရင်ဋ္ဌကီးက သက်တော်ေူခာက်ဆယ်ကေဵာ်၊ ဝၝတော် လေးဆယ် ကေဵာ်ခန်ႚ ရြိသည်။ ယင်း မတိုင်မီက ဘုန်းဋ္ဌကီး ကေဵာင်းသား လုပ်သက်လည်း မနည်း ရြိသည်။ သိုႚသော် ဉာဏ် ထိုင်းလနြ်းသည်။ ယနေႚ အထိ ရေစက်ခဵ တပုဒ် ဆုံးအောင် မရခဵင်။ ကိုရင်ဋ္ဌကီး ဘဝ မြာပဲ အ႟ိုး ထုတ်မည့်သူဖစ်သည်။
ကိုရင်ဋ္ဌကီိးံငြ့် မတည့် ရသည့် အေုကာင်းကို ကိုလထြနြ်းကေူပာူပသည်။
"ငၝက ကေဵာင်းမြာ ညဘက် ဘုရား ရြိခိုး္ဘပီးတဲ့ အခၝတိုင်း သိဒ္ဌတဉ မင်းသား ဆုကို တောင်းလေ့ ရြိတယ်၊ တိုႚဘုန်းဋ္ဌကီး ဟောတဲ့ အထဲမြာ ပၝတယ်၊ သိဒ္ဌတဉ မင်းသားဟိာုံစဉ်က ယသော်ဓရာဒေဝီ အူပင် ရမ္ထ သုဘ သုရမ္ထ ဆိုတဲ့ နန်းမ သုံးဆောင်မြာ မောင်းမမိင်္ံ မဵားစြာနဲႚ ခံစား ရတယ်၊ နောက်တော့မြ သူအို၊ သူနာ၊ သူသေ၊ ရဟန်းတည်း ဟူသော နိမိတ်ဋ္ဌကီး လေးပၝးကိုမင်လိုႚ သံဝေဂ ရ္ဘပီး တောထက်ြတဲ့ အခၝမြာ ဘုရာူးဖစ်္ဘပီး နောက်ဆုံး နိဗ္တာန်ကို ရောက်ခဲ့တယ်၊ တိုႚ ဗုဒ္ဌဘာသာ ဆိုတာ နိဗ္တာန်ကို ရည်မနြ်း ရမယ် မဟုတ်လား၊ ဒၝပေမဲ့ ပၝရမီိုံစဉ် အခၝမြာ နိဗ္တာန်ကို ဘယ်တခၝတည်း တန်းရောက်ိုံင်မလဲ၊ ဘဝ အဆက်ဆက် ပၝရမီူဖည့်ရ ဦးမယ်၊ ဘုရား အလောင်း သိဒ္ဌတဉ မင်းသား ပၝရမီူဖည့်ခဲ့ရတဲ့ ဘဝ အစဉ်အဆက်ကိုကည့်ရင် တေ - ဇ - သု - နေ - မ - ဘူ - စံ - နာ - ဝိ- ဝေ ဇာတ်တော်ဋ္ဌကီး ဆယ်ပၝးနဲႚ ငၝးရာ့ငၝးဆယ် ဇာတ်တော်တြေ ထဲမြာ ပၝတယ်၊ လူဖစ်ရင် လူမင်း၊ တိရစ္စာန်ူဖစ်တောင် တိရစ္စာန်မင်း သြာူးဖစ်တယ်၊ ဘယ်လောက် အားကဵစရာ ကောင်းတဲ့ ဘဝလဲ၊ ဒၝေုကာင့် ငၝက ဘုရား ရြိခိုးတိုင်း ရမ္ထ သုဘ သုရမ္ထ နန်းမ သုံးဆောင်၌ ရံေ႟တြော် အပေၝင်း္ဘခံရံလဵက် သိဒ္ဌတဉ မင်းသား အူဖစ်ကို ရလိုပၝ၏ အရငြ် ဘုရားလိုႚ အ္ဘမဲဆုတောင်းတယ်၊ ပု ရိ သ ယောကဵ်ား ဆိုတာ ဘုရားဆုကို ပန်ိုံင်တာပဲ မဟုတ်လား။"
"အဲဒၝကို ကိုရင်ဋ္ဌကီးက မကေဵနပ်ဘူး၊ သူႚထက် ကေဵာတယ်လိုႚ ထင်တယ်၊ သူက နတ်ူပည် ရောက်ခဵင်တယ်၊ ထုံးစံ အတိုင်း နိဗ္တာန် ရောက်ခဵင် တာတော့ ရြိတာပေၝ။ ဒၝပေမဲ့ နိဗ္တာန် မြာက ဘာမြ မရြိဘူး ဆိုတော့ ဆုသာ တောင်းရပေမဲ့ ခဵက်ခဵင်းတော့လည်း မရောက်ခဵင် သေးဘူး၊ နတ်ူပည် ကဵတော့ နတ်စည်းစိမ် ရြိတယ်၊္ဘပီးတော့ နတ်တသက် ဆိုတာလည်း လယ်ြတာ မဟုတ်ဘူး၊ လူႚူပည်မြာ တသက်၊ နတ်ူပည်မြာ တရက်တဲ့၊ နတ်ထဲမြာမြ သိုကားမင်းက တဖက် နတ်သမီး ငၝးရာနဲႚ ဘယ်လောက် ဇိမ်ကဵ သလဲ၊ ကိုရင်ဋ္ဌကီးက အဲဒၝ အားကဵ္ဘပီး သူ ဘုရား ရြိခိုးတဲ့ အခၝ သိုကားမင်း စည်းစိမ်ကို အဋ္ဌကိမ်ဋ္ဌကိမ် ခံစား္ဘပီးမြ နိဗ္တာန် မဂ်ဖိုသိုႚ ရောက်ရ ပၝလို၏ အရငြ် ဘုရားလိုႚ ဆုတောင်းလေ့ ရြိတယ်။ ငၝလည်း ငၝဋ္ဌကိက်ြတာ ဆုတောင်းတယ်၊ သူလည်း သူဋ္ဌကိက်ြတာ ဆုတောင်းတယ်၊ ဒၝ ဘာူဖစ်သလဲ၊ အဲဒၝကို ဘုရားက သိုကားရဲႚ အထက်က ဆ္ဘိုပီး ကေဵာင်းသားလေးတေကြေူမၟာက်ပေးတော့ သူက စိတ်ဆိုး္ဘပီး ငၝနဲႚ စကား မေူပာဘူး၊ ငၝလုပ်သမ္တွ သူက ကိုးလိုးကန်ႚလန်ႚ လုပ်ခဵင်တယ်၊ ဆရာတော်ဋ္ဌကီး ကိုလည်း ဟိုဟာတိုင် ဒီဟာတိုင်၊ ဒၝပေမဲ့ ဆရာတော်ဋ္ဌကီး ဝေယဵာဝင်္စတြေ အားလုံး ငၝက စိတ်တိုင်းကဵူဖစ်အောင် လုပ်ပေး ထားတော့ ဆရာတော်ဋ္ဌကီးနဲႚ ငၝနဲႚကေူပလည် နေတယ်၊ မဟုတ်ရင် ငၝ ကေဵာင်းမြာ နေလိုႚတောင် ရမြာ မဟုတ်ဘူး။"
ကဋ္ဋန်တော် ဆယ်တန်း စာမေးပြဲ အောင်္ဘပီး ဆေးတက္ကသိုလ် ရောက်သည်။ ကေဵာင်းပိတ်၍ အိမ်ူပန်သော အခၝ ကိုလထြနြ်းကို မတြေႚ။ အပေၝင်းအသင်းမဵား မေုးကည့် တော့လည်း အေး ဟုတ်တယ်၊ မတြေႚတာ အတော်ုက္ဘာပီဟုေူဖုကသည်။ နောက်တိံစြ် ကေဵာင်းပိတ်ခဵိန် ၌ကား ကိုလထြနြ်ိးံငြ့်ူပန်လည် တြေႚရြိ ရပေသည်။ အရင်ကလို ပုံစံမဵြိး မဟုတ်။ လူက ခေၝင်းလိမ်းဆီတြေ ဘာတြေ လိမ်းလိုႚ၊ေူပာင်ေူပာင်ရောင်ရောင်။ လက်မြာ လက်ပတ် နာရီိံငြ့်။
"ကိုလထြနြ်း၊ ခင်ဗဵားကို မတြေႚရတာတောင် အတော်ုက္ဘာပီ၊ ဘယ်ရောက်နေလဲဗဵာ၊ အလုပ်တြေ ဘာတြေ လုပ်န္ဘေပီနဲႚ တူတယ်။"
"အေးကြ ဆတ်သေခေဵာင်းဖဵားက ငက်ြတော် ဆိုတဲ့ ႟ြာမြာ ကေဵာင်းဆရာ လုပ်နေတယ်။"
ကေဵာင်းဆရာ။ ကဋ္ဋန်တော် သိသလောက် ကိုလထြနြ်းသည် အစိုးရ ကေဵာင်းမြာ ငၝးတန်း အထိပဲ နေဖူးသည်။ ငၝးတန်းတောင် နေဖူးတာပဲ ရြိသည်။ အောင်သည် မဟုတ်။ ကေဵာင်းဆရာ ဘယ်လိုဖစ်ိုံင် မည်နည်း။ ထိုအခဵိန်က အနည်းဆုံး ခုနစ်တန်း အောင်မသြာ မူလတန်း ဆရာူဖစ်ိုံင်သည်။
"ခင်ဗဵား ဘယ့်ိံယ်ြလုပ် ကေဵာင်းဆရာူဖစ်သလဲဗဵ။"
ကဋ္ဋန်တော်က တဲ့တိုး မေးလိုက်သည်။ သိူံငြ့်က သည်လိုပဲ အားမနာ ပၝးမနာေူပာနေကဵူဖစ်သည်။
"အစိုးရ ခန်ႚတာ မဟုတ်ဘူးကြ၊ ငၝ့ဘာသာ လုပ်တာ။"
သူက ဝမ်းသာအားရ ဆိုသည်။
"မင်းတိုႚ ရန်ကုန် ကေဵာင်းသြားတော့ ငၝလည်ူးပန်ုကားရေးမြာ စာတြေ သြားသြား ဖတ်ရင်းနဲႚ စဉ်းစားတယ်၊ သတင်းစာမြာ ကေဵးလက် တော႟ြာ ဖြံႚ္ဘဖြိးရေး အတကြ် ပညာတတ်တဲ့ လူတေကြ တောကို ဆင်းဖိုႚ လိုတယ် ဆိုတဲ့ အေုကာင်းတြေ ခဏခဏ ဖတ်ရတယ်၊ ငၝ အဲဒၝကို စိတ်ဝင်စားတယ်၊္ဘပီးတော့ ဘုန်းဋ္ဌကီး ကေဵာင်းမြာလည်း တသက်လုံး မနေခဵင်ဘူး၊ အဲဒၝနဲႚ ငက်ြတော်ကို သြားတယ်၊ အဲဒီ ႟ြာမြာ ငၝတိုႚ ဘဋ္ဌကီး တဝမ်းကြဲ တယောက် ရြိတယ်၊ ငၝငယ်ငယ်တုန်းက တခေၝက်ပဲ ရောက်ဖူးတယ်၊ သူတိုႚဆီမြာ စာသင်ကေဵာင်း ရြိတဲ့ ႟ြာကတော့ တော်တော် ဝေးတယ်၊ တောင်တြေ တောတြေ ကေဵာ်္ဘပီး သြားရတယ်၊ ငၝ ငက်ြတော်မြာ ကေဵး႟ြာ ဖြႚံ္ဘဖြိးရေး လုပ်ဖိုႚ သြားမယ် ဆိုတော့ ဘုန်းဋ္ဌကီးကေူပာတယ်၊ 'ဟဲ့ကောင်ူဖစ်ပၝ့ မလား' တဲ့။ူဖစ်ပၝတယ် ဘုရား၊ အဲဒီ႟ြာမြာ တပည့်တော် ဘာသာရေးရော လူမရြေး မြာပၝ ဦးဆောင်္ဘပီး လုပ်ပၝမယ် ဘုရား။ ဆိုတော့ 'မင်းက တော်တော် ဋ္ဌကီးဋ္ဌကီးကဵယ်ကဵယ် စိတ်ကူးတဲ့ အကောင်ပဲ၊ူဖစ်ရင်တော့ သာဓု ပေၝ့ကြာ၊ မူဖစ်ရင်လည်း ကေဵာင်ူးပန်လာခဲ့' ဆ္ဘိုပီး ငေတြဆယ် ပေးတယ်၊ ဦးပဥင်္င်း ဦးသုမနက သူႚနေကာ မဵက်မနြ် အဋ္ဌကီး ပေးတယ်၊ ငၝက သူႚဆီက ခဏခဏ ငြားတပ် တာကိုး၊ ငၝ သြားတဲ့ အခၝူပန်ုကားရေးက သတင်းစာ အဟောင်း တစောင်လည်း တောင်းသြားတယ်၊ ငၝ ငက်ြတော် ႟ြာနား ရောက်တဲ့ အခၝ စမ်းခေဵာင်းမြာ ရေခပ်နေတဲ့ ကောင်မလေး သုံးယောက်၊ ဆယ်ိံစြ် ကိုိးံစြ် လောက်စီ ရြိမယ်၊ ငၝူ့မင်တော့ မဵက်စိဖောက်တဲ့ လူဋ္ဌကီး လာတယ် ဆ္ဘိုပီး ထကြ်ေူပုးကတယ်၊ ရေအိုးကြဲတဲ့ လူက ကဲလြိုႚ၊ အဲဒီ ႟ြာက ကလေးတေက္ဘြမြိႚနား ႟ြာနား ရောက်ဖူးတာ မဟုတ်ဘူး။"
"တော်တော်ခေၝင်တဲ့ နေရာပဲ ပေၝ့နော်။"
"ဟုတ်တယ်၊ ခေၝင်တယ်၊ အဲဒၝနဲႚ ငၝလည်း ႟ြာထဲ ရောက်တော့ ငၝ့ဘဋ္ဌကီးအိမ် မေး္ဘပီး သြားတယ်၊ ငၝကလည်း ဦးထုပ်နဲႚ နေကာ မဵက်မန်ြနဲႚ လယ်ြအိတ် တလုံး လယ်္ဘြပီး လက်မြာ သတင်းစာလိပ် ကိုင်လိုႚ၊ အဲဒၝ ဘဋ္ဌကီးအိမ်မြာ ႟ြာက လူဋ္ဌကီးတြေ စုံတော့ ငၝက ခေၝင်းရင်းခန်းကနေ သတင်းစာူဖန်ႚ္ဘပီး ဓာတ်ပုံတြေူပ၊ စာတြေ ဖတ်ူပတယ်၊္ဘပီးတော့ အခုအခၝ ကေဵးလက် တော႟ြာ ဖြံႚ္ဘဖြိးရေးကို လုပ်ုကရမြာူဖစ်တဲ့ အတကြ် ငၝ ဒီ႟ြာမြာ စာသင်ကေဵာင်း ဖငြ့်ဖိုႚ လာတဲ့ အေုကာင်းေူပာူပတယ်၊ လူဋ္ဌကီးတြေ အားလုံးက သဘော ကဵုကတယ်၊ သူတိုႚ႟ြာမြာ လူဋ္ဌကီးပိုင်းက စာဖတ်တတ်တဲ့လူ လေးငၝးယောက် ရြိတယ်၊ ဒၝတောင် ငယ်ငယ်က ဘုန်းဋ္ဌကီးကေဵာင်းမြာ သင်ဖူးလိုႚ တတ်တာ၊ အခုလိုကားလာတဲ့ အခဵိန်ကဵတော့ ကဋ္ဌကီး ခခြေးတောင် ကောင်းကောင်း မမတ်ြမိတော့ဘူး၊ မဵက်စိ ကလည်း မနြ်ုကတယ်၊ ႟ြာလူဋ္ဌကီးတောင် သတင်းစာက ခေၝင်းစီး စာလုံးတေကြို ဖတ်တာ မေူဖာင့်ဘူး။ ငၝ ကေဵာင်းဖငြ့်ရင် ကလေးတြေ အားလုံး စာတတ်မယ် ဆ္ဘိုပီး ဝမ်းသာုကတယ်။ ကေဵာင်းဆရာကို လခ ပေးရမြာ ပေၝ့တဲ့၊ သူဋ္ဌကီးကေူပာတယ်၊ လခ ရယ်လိုႚ မဟုတ်ပၝဘူး၊ ကဋ္ဋန်တော် စားလိုႚ နေလိုႚရရင် တော်ပၝ္ဘပီ ဆိုတော့ ဟာ … ဒီလိုလည်း ဘယ်ဟုတ်မလဲ၊္ဘမြိႚမြာ ကေဵာင်းဆရာ လခ ဘယ်လောက် ရလဲတဲ့၊ တလကို တရာေူခာက်ဆယ့် ငၝးကဵပ် ရတယ် ဆိုတော့ မဵက်လုံူးပြးသြာုးကတယ်၊ အဲ့ဒီလောက်တော့ ပေးဖိုႚ မလိုပၝဘူး ဆ္ဘိုပီး ငၝတိုႚ ညိၟိံငြ်ုးကတော့ နောက်ဆုံး တရက်မြာ တကဵပ်ိံနြ်းနဲႚ တိံစ်ြကို သုံးရာေူခာက်ဆယ့် ငၝးကဵပ် ပေးမယ်လိုႚ သဘော တူုကတယ်၊ ဆေးခင်းခဵတဲ့ လိူံစ်ြယောက် ကလည်း ဆေးလိပ် သောက်ဖိုႚ ဆေး႟က်ြဋ္ဌကီး တယောက် တပို ပေးမယ်လိုႚေူပာတယ်၊ ဘဋ္ဌကီး ကလည်း သူႚအိမ်စားလည်း ရပၝတယ်တဲ့၊ နောက်တော့ ဒီလိုပဲ ဋ္ဌကံတြဲ့အိမ် ဝင်စားတာပၝပဲ၊ ႟ြာက တောင်ယာသိမ်းတဲ့ ရာသီမြာ အိမ်ေူခေူခာက်ဆယ်ကေဵာ် ရြိတယ်၊ တောင်ယာ လုပ်တဲ့ အခဵိန်ကဵတော့ တောင်ယာက ဝေးတဲ့ လူတေကြ ကိုယ့်တောင်ယာမြာ ကိုယ်တဲထိုး္ဘပီး သြားနေုကလိုႚ ႟ြာမြာ ဆယ့်လေး ငၝးအိမ်ပဲ ကဵန်တယ်၊ ငၝရောက်တော့ တောင်ယာ သိမ်းခဵိန်၊ အလုပ်အားတဲ့ အခဵိန်ကိုး၊ ႟ြာမြာ လူစည် နေတယ်၊ ဒၝနဲႚ သုံးလေးရက် ဆိုရင်ပဲ ကေဵာင်း ဆောက်ုကတယ်၊ ဒီက မူလတန်း ကေဵာင်းတြေ လိုတော့ ဘယ်ဟုတ်မလဲ၊ ဝၝးနဲႚပဲ တိုင်ထူ၊ ဝၝုးကမ်းခင်း္ဘပီး ဝၝးကပ် မိုးတယ်၊ိံစ်ြရက်ပဲုကာတယ်၊ အဲဒၝ ကေဵာင်းလည်း ကေဵာင်း၊ အိမ်လည်း အိမ်ပဲ၊ ငၝအိပ်ဖိုႚ အခန်းလေး တခန်း ကန်ႚပေး ထားတယ်၊ နေတော့ ကေဵာင်းမြာနေ၊ စာတော့ ႟ြာထဲ လ္တွောက်စားပေၝ့၊ ပထမိံစ်ြတော့ အားလုံး သူငယ်တန်း ခဵည်းပဲ၊ ငၝ့မြာ သင်ပုန်းဋ္ဌကီး စာအုပ်တအုပ် ပၝသြားတယ်၊ ကေဵာက်သင်ပုန်းနဲႚ ကေဵာက်တံတြေ သူဋ္ဌကီးက လူဋ္ဌကံနြဲႚ မြာပေးတယ်၊ အဲဒၝ မိံစ်ြက စာသင်္ဘပီး ဒီိံစ်ြကဵတော့ သူငယ်တန်းနဲႚ ပထမတန်း၊ အခု ကေဵာင်ူးပန်ဖငြ့်ရင် ဒုတိယတန်း တိုးလ္ဘာပီ။"
"အခု ခင်ဗဵား လာတော့ ကေဵာင်းပိတ် ခဲ့ရတာပေၝ့။"
"အေးလေ၊ အခုေိံရြာသီ ကေဵာင်ိးံစ်ြလ ပိတ်ထားတာ၊ ငၝ့ကေဵာင်းက အစိုးရ ကေဵာင်းအတိုင်း၊ သီတင်းကဋ္ဋတ် ကေဵာင်းဆယ်ရက် တခၝ၊ ဒီဇင်ဘာ ကေဵာင်းဆယ်ရက် တခၝ၊ အခုေိံကြဵတောိံ့စ်ြလ ပိတ်တယ်၊ တန်ဆောင်တိုင်မြာ ဆရာ ကန်တော့ပြဲလည်း လုပ်သေးတယ်။"
"အံမယ်၊ ခင်ဗဵားကို ကန်တော့ ရမြာပေၝ့။"
"အေးလေကြာ၊ ငၝက ဆရာပဲဟာ၊ ဆရာ ဆိုတာ ဒီလိုပဲ ကန်တော့ရတယ် ဆ္ဘိုပီး သင်ပေး ထားရ တာပေၝ့၊ ကန်တော့ဖိုႚ ယူလာတဲ့ မုန်ႚတြေ ဆိုတာ ကေဵာင်းမြာေူခခဵစရာ နေရာတောင် မရြိဘူး။"
"ဘုန်းဋ္ဌကီးကေဵာင်းမြာ တုန်းကလို နေမြာပေၝ့။"
"အေး ... ဟုတ်တယ်၊ အခု႟ြာမြာ ဘုန်းဋ္ဌကီး ကေဵာင်းလည်း ရြိန္ဘေပီ၊ အဲဒၝလည်း ငၝလုပ်တာပဲ၊ ႟ြာက လူတြေ ငၝကေူပာတယ်။ ခင်ဗဵားတိုႚမြာ တ႟ြာလုံး ဗုဒ္ဌဘာသာ ခဵည်းပဲ၊ ဟိုဘက်႟ြာနဲႚ နီးတာတော့ မန်ြတယ်၊ ဒၝပေမဲ့ ကိုယ့်႟ြာမြာ ဘုန်းဋ္ဌကီးကေဵာင်း သတ်သတ် ရြိတော့ ပိုမကောင်းဘူးလား ဆိုတော့ ဘုန်းဋ္ဌကီး ဘယ်က ရမလဲတဲ့၊ အဲဒၝနဲႚ ခင်ဗဵားတိုႚ ကေဵာင်းဆောက် ဖိုႚရယ်၊ ဘုန်းဋ္ဌကီး တပၝး အတကြ် ဆမြ်းကမြ်း ဝေယဵာဝေင်္စ အတက်ြသိာိုံင်အောင် တာဝန်ယူ၊ ဘုန်းဋ္ဌကီး ကဋ္ဋန်တော် ရြာပေးမယ် ဆ္ဘိုပီး္ဘမြိႚတက် တိုႚကေဵာင်းက ဆရာတော်ဋ္ဌကီး အကဵြိးအုကာင်းေူပာူပတော့ ကဋ္ဋန်းခေဵာင်း ကေဵာင်းက ဦးပဥင်္င်း ဣိံ္ဋာစာရကို ကေဵာင်းထိုင်ဖိုႚ လတ်ြတယ်၊ ကေဵာင်ူးဖစ်ဖိုႚ ကိင်္စ ဆရာတော်ဋ္ဌကီးပဲ အစအဆုံး စီစဉ် ပေးတယ်။"
"ခင်ဗဵား ရောက်သြားတာ ဒီ႟ြာ အတကြ် အမဵားဋ္ဌကီး အကဵြိး ကေဵးဇူး ရြိတာပေၝ့ဗဵာ၊ ခင်ဗဵားလို လူမဵြိးတြေ မဵားမဵားရြိရင် တော႟ြာတြေ အမဵားဋ္ဌကီး ဖြံႚ္ဘဖြိး တိုးတက် လာမြာ သေခဵာတယ်ဗဵ။" ကဋ္ဋန်တော်က တကယ်ပင် ဝမ်းသာ လြိက်လြဲစြာေူပာလိုက် မိသည်။
"စစ်တပ်က ဗိုလ်ဋ္ဌကီး ထနြ်းနောင် ကလဲ အဲဒီလိုပဲေူပာတယ်၊ ခင်ဗဵားကို ခဵီးကဵြး ပၝတယ်တဲ့။"
"ဟုတ်လား၊ ခင်ဗဵားနဲႚ ဘယ်တုန်းက သိတာလဲဗဵ။"
"တိုႚ႟ြာကို ဗိုလ်ဋ္ဌကီး ထနြ်းနောင်နဲႚ ရဲဘော်တြေ စစ်ဆင်ရေးနဲႚ ရောက်လာတယ်၊ ႟ြာက လူတြေ စ္ဘုပီး တရား ဟောတယ်၊ ဗိုလ်ဋ္ဌကီးက မေးတယ်၊ူမန်မာူပည်မြာ အခု အုပ်ခဵပ်ြနေတာ ဘာအစိုးရ လဲတဲ့၊ ႟ြာသားထဲက ဘယ်သူမြ မေူဖိုံင်ဘူး၊ အဲဒီတော့ ဗိုလ်ဋ္ဌကီးက သူဋ္ဌကီးမင်းေူပာပၝတဲ့၊ သူဋ္ဌကီးကို မေးတယ်၊ သူဋ္ဌကီးက ဗိုလ်ခဵပြ် နေဝင်း အစိုးရတဲ့၊ ဗိုလ်ဋ္ဌကီးက ဗိုလ်ခဵပြ် နေဝင်း ဦးဆောင်္ဘပီး အုပ်ခဵပြ် နေတာကတော့ မန်ြတယ်၊ ဒၝပေမဲ့ အစိုးရ နာမည်ကို မေးတာ ဆ္ဘိုပီး ကဲ … ကေဵာင်းဆရာေူပာပၝဦး ဆိုတော့ ငၝက တော်လန်ြရေး ကောင်စီ အစိုးရလိုႚေူပာလိုက်တော့ သဘော ကဵသြားတယ်၊ ကေဵာင်းဆရာေူပာတာ မန်ြတယ်တဲ့။"
"ဒၝနဲႚ ခင်ဗဵားတိုႚ ႟ြာတြေ ဘက်မြာ သူပုန်တြေ ဘာတြေ ရြိတယ်လိုႚေူပာသုံကားဖူးတယ်၊ ခင်ဗဵားကော သူပုန်နဲႚ တခၝမြ မတြေႚဘူးလား။"
"ဟာ … တြေႚတာပေၝ့၊ ဒၝပေမဲ့ ငၝ့ကိုတော့ ဘာမြ အိံ္ဈရာယ် မပေးဘူးကြ၊ ဘာူဖစ်လိုႚလဲ ဆိုတော့ တိုႚဘုန်းဋ္ဌကီး ကေဵာင်းမြာ ကေဵာင်းသား လုပ်သြားတဲ့ မောင်ူဖြ မင်းသိတယ် မဟုတ်လား။ အဲဒီ အကောင်က သူပုန်ထဲမြာ ဒီလိုပဲ နောက်လိုက် ငယ်သားပေၝ့။ ဒၝပေမဲ့ သူနဲႚ ရင်းရင်ြးီံြးီံးမနြ်း သိနေ တော့လည်း ဘာမြ အြေိာံင့်အယကြ် မပေုးကပၝဘူး၊ ႟ြာမြာ ဆက်ေုကးတြေ ဘာတြေ ကောက်လည်း ကိုလထြနြ်း နေပၝစေလိုႚေူပာတယ်။"
"ဒၝဆိုတော့ ခင်ဗဵားက အဲဒီ နယ်ေူမမြာ တကယ် မီးသေတဲ့ လူလိုႚ ဆိုရမြာပေၝ့။"
နောက်ပိုင်ိးံစ်ြမဵားတငြ် ကဋ္ဋန်တော်လည်း အိမ်ူပန်ူဖစ်သည့် အခၝူပန်ူဖစ်၊ မူပန်ူဖစ်သည့် အခၝ မူပန်ူဖစ်ိံငြ့်္ဘမြိႚသိုႚ အရောက်အပေၝက် နည်းခဲ့သည်။ ရောက်သည့် အခၝ မဵားတင်ြလည်း ကိုလထြနြ်ိးံငြ့် တစ်ခၝမြ ဆုံတြေႚရူခင်း မရြိပေ။ သိုႚသော် သူႚသတင်း ကိုကား္ဘမြိႚပေၞတငြ် နေသည့် သူႚဆေမြဵြိး သားခဵင်းမဵာိးံငြ့် ဆုံတိုင်း မေးမိ ခဲ့သည်။ ကိုလထြနြ်းသည် ငက်ြတော် ႟ြာ၌ သာမက ဆတ်သေ ခေဵာင်းဖဵား ဒေသ တခုလုံး ၌ပင် အရာဝင်သော၊ တင်ြကဵယ်သော ပုဂ္ဂိလြ် တယောက်ူဖစ်န္ဘေပီ ဆိုသည့် အေုကာင်း ကဋ္ဋန်တော်ုကားသိ ရသည်။ တောမြာ အိမ်ထောင်ကဵ္ဘပီး လယ်ိံငြ့် ကိုင်ိးံငြ့်ူဖစ်နေသည်ဟုကားရသည်။ ကေဵး႟ြာ အုပ်စု သမဝၝယမ အသင်းမြာ သူပၝသည်။ ကေဵး႟ြာ ကောင်စီ မြာလည်း သူပၝသည်ဟု သိရ လေသည်။
သူငယ်ခဵင်း တယောက်ကေူပာသည်။ "မင်းလူ လထြနြ်း အရင် ပုံစံ မဟုတ်တော့ ဘူးကြ၊ လူတြေႚလိုက်ရင် အ္ဘမဲ တိုက်ပုံနဲႚ လက်ကိုင်အိတ်နဲႚ စီးကရက်နဲႚ ဘုန်းဋ္ဌကီး ကေဵာင်းသား တုန်းကလို မြိန်မြိန်ကုပ်ကုပ် ႟ိုႚ႟ိုႚကဵြိးကဵြိး ႟ုပ်မဵြိး လုံးဝ မရြိတော့ဘူး၊ေူပာတာ ဆိုတာက အစ ပုံစံေူပာင်းသြား္ဘပီ၊ ငၝ တခၝတြေႚလိုႚ မေုးကည့် သေးတယ်။ ဟေ့လူ၊ ခင်ဗဵား ဘုန်းဋ္ဌကီးကေဵာင်း မေ့သြား္ဘပီလား ဆိုတော့ မမေ့ပၝ ဘူးကြာ၊ ငၝ ဒၝလုပ်တာ (လက်မထောင်္ဘပီး ပၝးစပ်ထဲ အရက် မော့သည့်ဟန် လုပ်ူပသည်) ဘုန်းဋ္ဌကီး သိသြားလိုႚ တဋ္ဌကိမ်းတည်း ဋ္ဌကိမ်းနေတာနဲႚ ငၝ ရြောင်နေတာလိုႚေူပာတယ်၊ တောမြာ နေတော့ ဘယ့်ိံယြ် နေသလည်း မသိဘူး၊္ဘမြိႚပေၞ တက်လာ ရင်တော့ မနက်ပိုင်း တေလြည်း အနႚံကလေး နဲႚကြ။"
"အေးကြာ၊ သူလည်း လူဋ္ဌကီး သူဋ္ဌကီူးဖစ်လာတော့ လူဋ္ဌကီး သူဋ္ဌကီး အလုပ်တြေ အတု ခိုး္ဘပီး လုပ်ုကည့်တာ နေမြာပေၝ့၊ တိုႚကသာ သူႚကို ဘုန်းဋ္ဌကီး ကေဵာင်းသား ဆိုတဲ့ အူမင် မပေဵာက်ဘဲ ရြိနေတာကိုး၊္ဘပီးတော့ တကယ့် ဘဝမြာ သူလည်း ခေသူမြ မဟုတ်ဘဲ၊ သိဒ္ဌတဉ မင်းသား ဆုတောင်း ထားတဲ့ ပုဂ္ဂိလြ် ပဲဟာ။"
ကိုလထြနြ်ိးံငြ့် ဆယ့်ငၝိးံစ်ြလောက် ကြဲကြာ နေခဲ့္ဘပီးမြူပန်လည် ဆုံတြေႚ ရလေသည်။ တြေႚသည့် နေရာက္ဘမြိႚနယ် ဆေး႟ုံမြာ။ ကဋ္ဋန်တော် လက်ထောက် ဆရာဝန် အလုပ် ရ္ဘပီးနောက်ိံစ်ြနေရိာံစ်ြဒေသ သြားရောက် တာဝန် ထမ်းဆောင် ခဲ့ရသေးသည်။ ထိုႚနောက်မြ ကဋ္ဋန်တော့်္ဘမြိႚ႟ြာ ကဋ္ဋန်တော့် ဇာတိသိုႚူပန်လည် ရောက်ရြိ လာသည်။ ကဋ္ဋန်တော် ရောက်္ဘပီး သုံးလခန်ႚ အုကာတငြ် ကိုလထြနြ်ိးံငြ့်ူပန်လည် ဆုံစည်း ရသည်။ ဆေး႟ုံသိုႚ လူနာ အူဖစ် ရောက်ရြိ လာူခင်း။
လူတကိုယ်လုံး ဝၝနေသည်။ အသားဝၝ အသည်းရောင် ရောဂၝ။ သည်တဋ္ဌကိမ်ိံငြ့် ဆိုလ္တွင်ူဖစ်တာ သုံးခၝ ရြ္ဘိပီ။ူဖစ်္ဘပီ ဆိုတိုင်း ဖဵားလိုက် နာလိုက်၊ မစာိးိုံင် မသောက်ိုံင်၊ အော့လိုက် အန်လိုက်ိံငြ့် ဆိုတော့ အာူးပတ်သည်။ ပိန်းခဵြံး လာသည်။ တိုက်ပုိံငြ့် လက်ဆြဲ ပတ္ဇအြိတ်ိံငြ့် အရက်ကလေး တူမူမိံငြ့် ဒူးယား လက်ုကား ညၟပ်က္ဘာမြိႚမြာ အစည်းအဝေး လာတက်သည့် ကိုလထြနြ်း၏ ပုံကို သူမဵားေူပာသုံကာိးံငြ့် စိတ်ထဲကူမင်ယောင်ကာ ဘာပဲေူပာေူပာ ကိုယ့်လူ ဆိုတော့ သဘော ကဵနေသော ကဋ္ဋန်တော်မြာ စိတ်ထဲတငြ် တကိုယ်လုံး ဝၝထိန်္ဘပီး ညၟဉ်းသိုးသိုး ပိန်ညေၟာင်ညေၟာင်ိံငြ့် အဘိုးဋ္ဌကီး အိုကလေးပုံ ပေၝက်နေသည့် ကိုလထြနြ်းကိုမင်လိုက်ရသည့် အခၝ အတော်ပင် စိတ်မကောင်ူးဖစ်သြား မိသည်။
ကဋ္ဋန်တော်ကိုမင်တော့ သူလည်း ဝမ်းသာ ဝမ်းနည်း၊ "ကဋ္ဋန်တော့်ကို ကယ်ပၝဦး ဒေၝက်တာ" ဟု ဆိုသည်။ "ဒေၝက်တာတြေ ဘာတြေ လုပ်မနေနဲႚဗဵာ၊ အခဵင်းခဵင်းတြေ ပဲဟာ၊္ဘပီးတော့ ခင်ဗဵား ရောဂၝက ကယ်ပၝ ယူပၝေူပာရမယ့် ရောဂၝမဵြိးလည်း မဟုတ်ပၝဘူးဗဵ၊ တော်ုကာ ကောင်းသြား မြာပေၝ့" ဆ္ဘိုပီး ကဋ္ဋန်တော်က သူႚအား ရင်းရင်ြးီံြးီံးေူပာင်ေူပာင်လြောင်လြောင် သဘောမဵြိးံငြ့် "ခင်ဗဵား ကလည်း ႟ြာမြာ လူဋ္ဌကီး ဆ္ဘိုပီး ဖမ်းလိုႚ ရတဲ့ အရက်ပုန်းတြေ တယောက်တည်းခဵည်း သောက်သောက် ပစ်တာ ကိုးဗဵ၊ အဲဒၝေုကာင့် အသည်း မကောင်ူးဖစ်္ဘပီး ဒီရောဂၝ ခဏ ခဏူပန်ူဖစ်တာ၊" ဆိုတော့ သူက မဵက်ရည်ကလေး လည်ကာ "ကဋ္ဋန်တော် အခု အဲဒၝတြေ မလုပ်တော့ ပၝဘူး ဒေၝက်တာ၊ လယ်ပဲူပန်လုပ်နေတယ်" ဟု ဆိုသည်။ ကဋ္ဋန်တော်လည်း ဘာမြ ဆက်မေူပာူဖစ်တော့။
နောက်တနေႚ ကဋ္ဋန်တော် ဆေး႟ုံ ရောက်၍ ကိုလထြနြ်းတိုႚ လူနာခန်းဘက် မ္တွော်ုကည့်မိသော အခၝ သူႚခုတင် ဘေးတငြ် အမဵြိးသမီး ႟ယြ်႟ယြ် တယောက် ထိုင်လဵက်ေူခထောက်ကြိုိံပ်ိံယြ် ပေးန္ဘေပီး နောက် ခပ်ငယ်ငယ် မိန်းကလေး တယောက်က သံပရာရည်ဖေဵာ် နေတာ တြေႚရသည်။ ကဋ္ဋန်တော်ုကည့်နေတာူမင်တော့ အနားကူဖတ်သြားသည့် ဆရာမ တယောက်က ရပ်္ဘပီးေူပာသည်။ "ဆရာ့ လူနာက ခေဵာင်းဖဵားက လာလိုႚသာ တော်တော့တယ် ဆရာရေႚ၊ ဘယ်တယောက် ညာတယောက်နဲႚ အဲဒီ မိန်းမိံစ်ြယောက်နဲႚ တအိမ်တည်း နေတယ်လိုႚေူပာတယ်။"
ကဋ္ဋန်တော် လူနာ လညြ့်ုကည့်သည့် အခဵိန် ကိုလထြနြ်း ခုတင် ရောက်တော့ သူႚရောဂၝ အေူခအနေ မေး၊ စမ်းသပ်ုကည့်႟္ဘြပီးနောက် ဟိုတုန်းက အေုကာင်း သတိ ရသည်ိံငြ့်္ဘပြံးမိကာ သူႚကို မေုးကည့် မိသည်။
"ကိုလထြနြ်း၊ ရမ္ထ သုဘ သုရမ္ထ နန်းမ သုံးဆောင်မြာ ရံေ႟တြော်မဵား္ဘခံရံလဵက် ဆိုတာ မတ်ြမိ သေးလားဗဵ။"
"မတ်ြမိတာပေၝ့ ဒေၝက်တာ၊ အဲ့ဒီ သိဒ္ဌတဉ မင်းသာူးဖစ်အောင် ဋ္ဌကြိးစားတာမြာ ကဋ္ဋန်တော် အလုပ်ကူပတ်ြတာပဲ။" ကိုလထြနြ်းက စိတ်နာဟန်ိံငြ့် ဆိုလေသည်။ အနီးအနားရြိ ဇနီးမယာိးံစ်ြယောက် ကတော့္ဘပြံးတုႚံတုႚံ။
"တောင်းဆိုး ပလုံးဆိုး ကိုသာ ပစ်႟ိုး ထုံးစံ ရှိတယ်၊ သားဆိုး သမီးဆိုးကို ပစ်႟ိုး ထုံးစံ မရှိဘူးလို့ ရှေးလူကြီးများ ဆိုစကား ရှိတယ် မဟုတ်လား။"
"အဲဒါဟာ မိဘရဲ့ မေတ္တာကို ဖော်0x150ွှန်းတဲ့ စကား၊ မိဘ မေတ္တာ ဘယ်လောက် ကြီးမားတယ်၊ သားသမီး ဘယ်လို ဆိုးဆိုး၊ မပစ်ရက် မပစ်နိုင် မစွန့်ရက် မစွန့်နိုင် ဖြစ်ရတယ် ဆိုတာကို ပြောတာ။"
"ဒီတော့ ဒီစကားဟာ 'မပစ်ရက်ဘူး၊ ပစ်႟ိုး ထုံးစံ မရှိဘူး' လို့ပဲ ပြောတာ၊ ' ပစ်လို့ မရဘူး' လို့ မပြောဘူး။"
"ဒီ အချက်ကိုတော့ အလေးအနက် သတိထား။"
"မိဘနဲ့ သားသမီး၊ လင်နဲ့ မယား၊ ညီအစ်ကို မောင်နှမ၊ အဆွေ ခင်ပွန်း အချင်းချင်း ဘယ်သူမဆို တဦးကို တဦး ပစ်ချင်ရင် တကယ် စွန့်ပစ်မယ် ဆိုရင် စွန့်ပစ်လို့ ရတယ်။"
"အဲ … ပစ်လို့ မရတဲ့သူ၊ ဘယ်လို ဘယ်နည်းနဲ့မှ ပစ်လို့ မရတဲ့သူ တဦး ရှိတယ်၊ ဘယ်သူ့ကို ဘယ်သူက ပစ်လို့ မရတာလဲ … သိလား။" "ကိုယ့်ကိုကိုယ် ပဲကွ၊ ကိုယ့်ကိုကိုယ်ပဲ၊ ကိုယ့်ကို ကိုယ်ကျတော့ ဘယ်လိုပဲ စွန့်ပစ်ချင် စွန့်ပစ်ချင် စွန့်ပစ်လို့ မရဘူး၊ သတ်သေဖို့ ဆိုတာလဲ အပြော လွယ်သလောက် အလုပ် မလွယ်ဘူး။"
"ဒါကြောင့် ကိုယ့်ကိုကိုယ် စွန့်ပစ်ချင် ရမယ့် အခြေအနေ မရောက်အောင် ထိန်းသိမ်း၊ ဒါမှ မဟုတ်ရင်တော့ မသေမချင်း 'ဝဋ်' ခံရပြီ မှတ်ပေတော့"
စာရေးသူ ရှစ်တန်း ကျောင်းသား ဘဝက ဖြစ်ပါသည်။ ကျောင်းသွားဖော် လှအောင်ကို ကျောင်းသွားရန် ဝင်ခေါ်စဉ် လှအောင်၏ အဖေ ဦးလှကျော်က သူ၏ တဦး တည်းသော သားကို အထက်ပါ အတိုင်း ဆုံးမ ပြောဆို နေသည်။ လှအောင်သည် ကျောင်းသွားရန် အသင့် အနေအထားတွင် ရှိ၏။ ကုလားထိုင်တွင် ခပ်ကုပ်ကုပ် ကလေး ထိုင်နေသည်။ ခေါင်းကို ငုံ့ထားသည်။ သူ့အဖေက သူ့ကို မည်သည့် အချိန်က စတင် ဆုံးမ နေသည် မသိ။ စာရေးသူ ရောက်သွားသော အခါ ' တောင်းဆိုး၊ ပလုံးဆိုး' မှ စတင် ကြားရသည်။ ' လူကြီး သူမ တို့၏ ဆိုဆုံးမ စကားကို လေးလေးစားစား နာခံ မှတ်သား ရမည်' ဟူ၍ စာရေးသူ၏ အဖေက 0x150ွှန်ကြား ထားသည့် အတိုင်း စာရေးသူလည်း လှအောင်၏ ကုလားထိုင် ရှေ့ရှိ ကုလားထိုင်တွင် တ႟ိုတသေ ဝင်ထိုင် လိုက်ပါသည်။
ဦးကျော်လှသည် လှအောင်၏ မျက်နှာကို မကြည့်ဘဲ ပြောနေခြင်း ဖြစ်၏။ စာရေးသူက လှအောင်နှင့် မျက်နှာချင်းဆိုင် ဖြစ်နေ၍ မကြည့်ဘဲ မြင်နေ ရသည်။ ဦးလှကျော် ဆုံးမ နေစဉ် ဖြစ်ပေါ် နေသော လှအောင်၏ မျက်နှာကို ဦးလှအောင် မြင်လျှင် လည်ပင်း ညၟစ်သတ် မိလိမ့်မည် ထင်သည်။ မထီလေးစား အသွင်မှ အစ မလိုလား မနှစ်မျို့သည့် အမူအရာက တမျိုးပြီး တမျိုး ပေါ်နေသည်။
လှအောင်သည် စာရေးသူ၏ တကယ့် ကျောင်းသွားဖော် ဖြစ်၏။ နံနက် ကျောင်းသွားချိန် အိမ်မှ ထွက်စဉ်သာ လှအောင်က စာရေးသူနှင့် တွဲထွက်ပြီး ကျန်အချိန် အားလုံးတွင် စာရေးသူနှင့် လုံးဝ မဆက်ဆံ တော့ပေ။ သဘာဝချင်း မတူသည့် အတွက် ဆက်ဆံ ၍လည်း မရပေ။
လှအောင်၏ အဖေ ဦးလှကျော်သည် မော်လမြိုင် ဈေးကြီး ထဲတွင် အထည်ဆိုင် တဆိုင်နှင့်ေ႟ွှဆိုင် တဆိုင် ဖွင့်ထားသည်။ အထည်ဆိုင်ကို လှအောင်၏ အစ်မ မလှမေက ဦးစီးပြီးေ႟ွှဆိုင်ကို လှအောင်၏ အမေ ဒေါ်အုံးက ဦးစီးသည်။ ဦးလှကျော်က နှစ်ဆိုင်လုံးကို ဦးစီး တာဝန် ယူပြီး ဦးလှကျော်၏ တကယ့် လုပ်အားမှာ ဘာသာရေး ဘက်တွင် ရောက်နေသည်။
လှအောင် တို့မှာ မောင်နှမ နှစ်ယောက်တည်း ရှိ၍ မလှမေက လှအောင်ကို အလို လိုက်သည်။ ဒေါ်အုံး ကလည်း တဦးတည်းသော သားမို့ အလို လိုက်သည်။ မလှမေကို ခုနစ်တန်း အောင်႟ုံဖြင့် ကျောင်းအထွက် ခိုင်းလိုက် သော်လည်း လှအောင်ကိုမူ ဘွဲ့ရသည် အထိ ထားမည်ဟု အားခဲ ထားကြသည်။ ထိုစဉ်က ထိုဒေသ များတွင် ဘွဲ့ရပြီး သူကို လက်ချိုး ရေတွက်၍ ရသည်။ လှအောင်ကို အလို မလိုက်သူက ဦးလှကျော်။
လှအောင်မှာ အဖေက သတ်မှတ် ပေးထားသော မုန့်ဖိုး တကျပ် အပြင် အမေက ပေးသော ငါးကျပ်နှင့် အစ်မက ပေးသော ငါးကျပ် ရှိသေးရာ တနေ့မုန့်ဖိုး ဆယ့်တစ်ကျပ် ရသည်။ စာရေး သူတို့က ငါးမူးသာ ရသည်။
လှအောင်သည် ဥာဏ်ကောင်းသည်။ စာကြိုစားမှု လုံးဝ မရှိ။ ကျောင်းပြေးသည်။ ႟ုပ်ရှင် ကြည့်သည်။ သဘာဝချင်း တူသူများနှင့် ပေါင်းပြီး တေသည်။ လေသည်။ ဖဲ႟ိုက်သည်။ တခါတရံ အခြေအနေ ပေးလျှင် အရက်ပါ သောက်သည်။ 'ကရယ်ဗရင်-အေ' စီးကရက်ကို စွဲစွဲမြဲမြဲ သောက်သည်။ မုန့်ဖိုး အပြင် ႟ုပ်ရှင် ကြည့်ရန် သူငယ်ချင်း များအား ကေဋ္ဋးမွေးရန် ကျောင်း အတွက် ဘာကြေး ညာကြေး ပေးရန် စသည့် နည်းမျိုးစုံဖြင့် တောင်း၍ ရသော ငွေများလည်း ရှိသေး၏ ။ ထိုငွေများက လှအောင်ကို အဆိုး ဘက်သာ တွန်းပို့ နေသည်။
"ငါက ပညာ တတ်ကော ဘာလုပ်ရ မလဲ၊ ပညာ မတတ်လဲ ဘာဖြစ် မလဲ၊ ငါ့မိဘဟာ ဆယ်သိန်း ဖိုးလောက် ချမ်းသာတယ်၊ တို့မောင်နှမ နှစ်ယောက်တည်း ရှိတယ်၊ တယောက် ငါးသိန်းပဲ၊ နှစ်သိန်းလောက် ဘဏ်ထည့် ထားလိုက်ရင် တသက်လုံး မငတ်တော့ဘူး၊ ဒီတော့ ဘာလို့ အပင်ပန်း ခံပြီး စာသင် နေတော့ မလဲ။
"အဲဒီတော့ ဘာလုပ်ရ မလဲ၊ ဒီမှာ သူငယ်ချင်း …. လူ့လောကမှာ လူဖြစ်ရတာ ဘယ်လောက် ကြာလို့လဲ၊ ထားပါတော့ …. ခုနစ် ဆယ့်ငါးနှစ်လို့၊ အဲဒီ အထဲမှာ နှစ်ဆယ့် ငါးနှစ် လောက်က ကလေး ဘဝနဲ့ ကိုယ်လုပ်ချင်တာ ဘာမှ မလုပ်ရဘဲ ပညာပဲ ကြိုးစား သင်နေရတဲ့ ဘဝ၊ အသက် ခြောက်ဆယ်လောက် အထိက သား သမီးတွေ အတွက် စီးပွားရှာ၊ ကျောင်းက ထွက်ထွက်ချင်း မိန်းမ ရရင်တော့ စီးပွားရှာတဲ့ ဘဝထဲ တန်းဝင် သွားပေါ့၊ ခြောက်ဆယ် နောက်ပိုင်း ကျတော့ ဘဝ ကူးကောင်းအောင် တရားရှာ၊ ဘယ်မှာလဲ လွတ်လွတ်လပ်လပ် ပျော်ရတဲ့ ဘဝ၊ ဘယ်မှာ လူဖြစ်ရကျိုး နပ်တော့ မလဲ။"
"ငါကတော့ အမှန်အတိုင်း ပြောမယ်၊ လူ့ပြည်မှာ အကြာကြီး မနေချင်ဘူး၊ မလုပ်နိုင် မစားနိုင်၊ ဘာမှ မစွမ်းဆောင် နိုင်တော့တဲ့ အိုမင်း မစွမ်း ဘဝနဲ့လဲ မနေချင်ဘူး၊ အ႟ွယ် ကောင်းတုန်းမှာ ပျော်မယ် ပါးမယ်၊ လုပ်ချင်တာ အကုန် လုပ်မယ်၊ လူ့စည်းစိမ်ကို အပြည့် ခံစားမယ်၊ လူ့စည်းစိမ်ကို အပြည့် မခံစား နိုင်တဲ့ အ႟ွယ် ရောက်တာနဲ့ သေပစ်မှာပဲ၊ ဒါပဲ။"
"အဲ …. မင်းကတော့ ဆင်းရဲတယ်၊ ငါနဲ့ မတူဘူး၊ ပညာ ကြိုးစားသင်၊ ပညာတတ်မှ လူတန်းစေ့ ကလေး နေနိုင်မယ်၊ ငါ့ကို တုလဲ မတုနိုင်၊ အားလဲ မကျနဲ့၊ ဆုံးလဲ မဆုံးမနဲ့"
တနေ့တွင် အတူ ကျောင်းသွားရင်းမှ လှအောင်က သူ့အဖေက ခဏခဏ မြည်တွန် တောက်တီး၍ နားငြီးကြောင်း ပြောသဖြင့် စာရေးသူက မိဘက သားသမီး ဆင်းရဲမည် စိုး၍ ပြောဆို ဆုံးမခြင်းကို ဤသို့ မပြောသင့်ကြောင်း၊ မိဘ စကားကို နားထောင်ပြီး ပညာ ကြိုးစား သင် သင့်ကြောင့် ပြန်လည် ပြောဆိုရာ လှအောင်က အထက်ပါ အတိုင်း သူ၏ အယူအဆကို ပြောသည်။ ထို့ကြောင့် စာရေးသူသည် သူ့အား နောက်ထပ် မပြောတော့ချေ။
မော်လမြိုင်တွင် ရှစ်တန်း အောင်ပြီးနောက် စာရေးသူက ရန်ကုန် ရောက်လာသည်။ ရန်ကုန်တွင် ဆယ်တန်း အောင်ပြီး တက်ကသိုလ် ဆက်တက်သည်။ မော်လမြိုင်မှ သူငယ်ချင်း များနှင့် အဆက်အသွယ် မပြတ်လှ။ စာဖြင့် ဆက်သွယ်လျက် ရှိခဲ့သည်။ လှအောင် ထံတော့ စာရေး သော်လည်း ပြန်စာ မရ၍ ထပ်မရေး ဖြစ်တော့။ သို့သော် လှအောင်တို့ သတင်း ကိုတော့ သူငယ်ချင်း များမှ တဆင့် ကြားနေရသည်။ လှအောင် စာမေးပွဲ ကျပြီး ကျောင်းဆက် မတက်ဘဲ လေနေသည်။ ဦးလှကျော် လေဖြတ်ပြီး အိပ်ရာထဲ လဲနေသည်။ မလှမေက စေ့စပ် ထားသော ကိုဘသိန်းနှင့် လက်ထပ် လိုက်သည်။ ဦးလှကျော် ဆုံးသည်။ ဒေါ်အုံး အိပ်ရာထဲ ဘုံးဘုံးလဲသည်။ နောက် …. ဒေါ်အုံး ဆုံးသည်။ လှအောင် တယောက် မူကောင်းတုန်း တေကောင်းတုန်း လေကောင်းတုန်း။
အထက်ပါ အဖြစ်အပျက် များသည် နှစ်နှစ်ကျော် သုံးနှစ် အတွင်း ဖြစ်ပွား သွားသော အဖြစ်အပျက်များ ဖြစ်၏။ လှအောင် တေလွန်း ဖြုန်းလွန်း သဖြင့် မလှမေက အမွေ ခွဲလိုက်သည်။ လှအောင်ကေ႟ွှဆိုင်နှင့် ပြန်အမ်း ငွေများ ရသည်။ မလှမေက နေအိမ်နှင့် အထည်ဆိုင် ရသည်။
လှအောင်ေ႟ွှတောင် တန်းတွင် တိုက်ခန်း တခန်း ငှားနေသည်။ေ႟ွှဆိုင်ကို ဒေါ်အုံး လက်ထက် ကတည်းက လုပ်လာသော ဦးရှာ၊ ဦးသောင်း တို့နှင့် လွှဲထားသည်။ ပြန်အမ်း ငွေများကို ဘဏ်တွင် ထားသည်။ နေ့စဉ် အသုံးက ဆိုင်မှ ယူသည်။ အမြတ် တရာ ရှိလျှင် လှအောင် ယူငွေက နှစ်ရာ ဖြစ်သည်။
"ဟေ့ကောင် အုန်းသွင်၊ မင်း စာရေးဆရာ လုပ်နေတယ်ဆို၊ ဖေသိန်းတို့ ပြောတယ်၊ ငါတော့ မဖတ်မိ ပါဘူး၊ ငါ့မလဲ သင်ပုန်ကြီးတောင် ဖတ်တတ်ပါ တော့မလား မသိဘူး၊ ဟဲ … ဟဲ … ဟဲ …."
စာရေးသူသည် ကျောင်းမှ ပညာ တပိုင်း တစနှင့် ထွက်ပြီး ရန်ကုန်တွင် အလွတ် ပညာသင် ကျောင်းဆရာ လုပ်ရင်း သတင်းစာ များတွင် ဝတဉုတိုနှင့် ဆောင်းပါးများ ရေးသားလျက် ရှိရာမှ မော်လမြိုင်သို့ တခေါက် ပြန်သွားရာ သင်္ဘောဆိပ်တွင် လှအောင်နှင့် တွေ့ပြီး လှအောင်က အထက်ပါ အတိုင်း ပြောဆို နှုတ်ဆက်သည်။
"စာရေးဆရာ အခေါ် မခံနိုင် သေးပါကွာ၊ လက်သင် ဘဝ ရှိပါ သေးတယ်၊ မင်းရဲ့ သတင်းတော့ ငါ အမြဲလိုလို ကြားနေ ပါတယ်၊ အခု ဘယ်သွား မလို့လဲ"
စာရေးသူက ဖြေပြီး ပြန်မေး လိုက်သည်။ အချိန်မှာ ညနေ ငါးနာရီခန့် ဖြစ်ပြီး လှအောင်၏ နောက်တွင် ပရိသတ်က ဆယ်ဦးထက် မနည်း။ သူတို့ အားလုံး လှအောင်နှင့် တထေရာတည်း၊ ႟ုပ်ချင်း တူသည် မဟုတ်။ ဆူကြုံ နိမ့်မြင့် စုံသည်။ တထေရာတည်း တူသည်မှာ လှအောင် ကဲ့သို့ အရက်ချိုး မျက်နှာ နီစပ်စပ် အမ်းတမ်းတမ်း။
"ငါ့အကြောင်း မင်း ကြားနေတယ် ဆိုရင် ဘယ်သွားမလဲ မေးစရာ လိုသေးလားကွ၊ 'နမ်း႟ွမ်း' (ပျော်ပွဲစား႟ုံ) ကို သွားမလို့၊ ဝါသနာ ပါရင် လိုက်ခဲ့"
လှအောင် ပြန်ဖြေပြီး ခေါ်လိုက်သည်။ စာရေးသူက ကိစ္စ ရှိသေး၍ မလိုက် နိုင်သေးကြောင်း ပြောပြီး လမ်းခွဲ ခဲ့သည်။
လှအောင်သည် ကုဋေ ရှစ်ဆယ် သူဋ္ဌေးသား မိဘ သေပြီးစ အနေမျိုး ဖြစ်နေသည်။ လှအောင်၏ နောက်တွင် နောက်လိုက် နောက်ပါေ0x144ခရံ သင်းပင်း တပုံတပင်ဖြင့် သောက်လိုက်၊ စားလိုက်၊ ပျော်လိုက်၊ ပါးလိုက် ဖြစ်နေသည်ဟု ဆိုသည်။ ဦးရှာမှာ လှအောင်ကို ငယ်စဉ်ကပင် ကြောက်ရသူ ဖြစ်၍ လှအောင် တောင်းသလောက် ပေးရသည်။ စာရင်းသာ အတိအကျ လုပ်ထား ရသည်။ မလှမေ ကတော့ ကောင်းသည် ဆိုးသည် မပြောတော့။ ပြော၍လည်း ရမည် မဟုတ်။ အမွေကို သစ်သီး ထက်ခြမ်းကွဲ ခွဲခဲ့ပြီး ဖြစ်၍ သင်းထိုက်နှင့် သင်းကံ ရှိပါ စေတော့ဟု ပစ်ထားပြီး ကိုယ့်စီးပွားကိုယ် ဖိလုပ် နေခဲ့သည်။ ဈေးကြီးထဲမှ ဆိုင်အပြင် အောက်လမ်းမကြီးတွင် တဆိုင် ခွဲဖွင့် နိုင်ခဲ့သည်။
သို့ဖြင့် အတန်ကြာ နေခဲ့ရာ မော်လမြိုင် ဈေးကြီး မီးလောင်သော အခါ လှအောင်တို့ ဆိုင်နားမှ ကပ်လောင် သဖြင့် ဦးရှာမှာ လူလွတ်အောင် မနည်း ပြေးခဲ့ရ သည်ဟု ဆိုသည်။ လှအောင်ေ႟ွှဆိုင် ပြုတ်သွားပြီ။ တကယ့်တော့ လှအောင်၏ေ႟ွှဆိုင်မှာ ဟန်သာ ရှိတော့သည်။ လုံးပါး ပါးခဲ့ပြီမို့ များများစားစား မကျန်တော့။
ရင်းနှီး သူများက လှအောင်ကို ဘဏ်မှ ငွေထုတ်ပြီး ဆိုင်ပြန် ဖွင့်ရန်နှင့် အိမ်ထောင် ပြုပြီး စီးပွားရေးကို ဖိဖိစီးစီး လုပ်ရန် အကြံ ပေးသည်။
"ငါ့မှာ နဖား မထိုးမယ့် မိန်းမတွေ အများကြီး ရှိပါလျက်နဲ့ ဘာလို့ အမိုက်ခံပြီး နဖား ထိုးမယ့် မိန်းမ တယောက်ကို ယူရမလဲ၊ ဘဏ်က ငွေကို တလ ငါးရာ ထုတ်သုံးရင် အနှစ် သုံးဆယ်လောက် သုံးနိုင်တယ်၊ ဘာလို့ စာရင်း အ႟ှုပ် ခံပြီး အလုပ် လုပ်တော့ မလဲ၊ ပြီးခဲ့တဲ့ ဆိုင်တောင် လုပ်ချင်လို့ မဟုတ်ဘူး ဦးရှာကို သနားလို့"
လှအောင်က ဤသို့ ပြန်ပြောပြီး ဆက်လက် ပေတေ နေခဲ့သည်။ လှအောင် ဘဝ ပိုပြီး ဆိုးသွား သည်မှာ 'မာကျောက်' စွဲခြင်းပင် ဖြစ်၏ ။ ထို့ကြောင့် အနှစ် သုံးဆယ် သုံးမကုန် ဆိုသော ဘဏ်မှ ငွေမှာ သုံးနှစ် အတွင်း ဘဏ်စာရင်း ပိတ်လိုက် ရသည်။ နောက် … အိမ်ရှိ ပစ္စည်းများ ချရောင်းသည်။ နောက် … အိမ်ခန်းပါ ရောင်းပြီးနောက် …. လှအောင် တယောက် မော်လမြိုင်မှ ပျောက်ချင်း မလှ ပျောက်သွား၏ ။ မော်လမြိုင်တွင် ကျောင်းအတူ နေခဲ့သည့် စာရေးသူတို့ ကျောင်းနေဖက် သူငယ်ချင်း များသည် မြန်မာနိုင်ငံ အနှံ့ ရောက်ကြသည်။ မကြာခဏလည်း ပြန်တွေ့ ကြသည်။ လှအောင်ကို မည်သူမှ မည်သည့် နေရာတွင်မျှ မတွေ့ခဲ့ကြ။
" ငါ့ မြေးတို့ရယ် … အဘိုး ဒုက္ခိတကို သဒ္ဓါ သေ႟ွ့ လှခြဲ့ တန်းခဲ့ စွန့်ကြဲ ခဲ့ကြ ပါကွယ်"
ပဲခူးေ႟ွှမောဓော ဘုရားကို ရောက်တိုင်း ဤအသံကို ကြားနေကျ ဖြစ်သည်။ စာရေးသူတို့ မိသားစုမှာ ရက်အားကလေးများ ရလျှင် တနေရာ ရာကို ဘုရားဖူး ထွက်တတ် ကြသည်။ ဘုရားစုံလည်း ဖူးရ လမ်းပန်းလည်း ကောင်းသည့် ပဲခူးကိုမူ ခြောက်လ တကြိမ်မျှ ရောက်တတ် ကြသည်။ စောင်းတန်း အတက်တွင် အသက် (၇ဝ) ခန့် ရှိမည် ထင်ရသော အဘိုးအို တဦးက လာသမျှ ဘုရားဖူး များကို ဤသို့အလြှ ခံနေသည်ကို အခေါက်တိုင်း တွေ့ရသည်။ စာရေးသူ၏ သားသမီး များက အေ0x143ကများ လှကြသည်။ အဘိုးအိုမှာ အတော် ဆိုးဆိုးဝါးဝါးပင် ကိုယ်ပျက်လျက် ရှိသည်။
တကြိမ်တွင် မိသားစုများ ဘုရား ရင်ပြင်ပေါ် တက်သွားကြပြီး စာရေးသူက စောင်းတန်းဝတွင် အသိ တဦးနှင့် စကား ပြောနေရ သဖြင့် တဦးတည်း ကျန်ပြီးမှ လိုက်တက် ခဲ့ရသည်။ တွေ့နေကျ အဘိုးအို ကိုလည်း တွေ့ရသည်။
"ဆရာလေး …. စကား နည်နည်းလောက် ပြောခွင့် ပြုပါလား"
"ဘာပြော ချင်လို့လဲ၊ ပြောချင်တာ ပြောပါ" ဟု ပြန်ပြော လိုက်သည်။
"မိဘနဲ့ သားသမီး၊ ညီအစ်ကို မောင်နှမ၊ အဆွေ ခင်ပွန်း အချင်းချင်း တဦးကို တဦး တကယ် စွန့်ပစ်မယ် ဆိုရင် စွန့်ပစ်လို့ ရတယ်၊ ဘယ်လိုမှ စွန့်ပစ်လို့ မရတာက ကိုယ့်ကိုယ်ပဲ ဆိုတဲ့ စကားကို ကြားဖူး သလား"
စာရေးသူ၏ နားတွင် နွေခေါင်ခေါင် မိုးကြိုး ပစ်ချသံ ကြားလိုက် ရသကဲ့သို့ ဖြစ်နေသည်။ များစွာလည်း တုန်လှုပ် ချောက်ချား သွားသည်။ နှုတ်မှလည်း ….
"လှအောင် … လှအောင် … လှအောင် …. မဟုတ်လား" ဟု သုံးထပ်ဆင့် မေးလိုက်သည်။
"ဟုတ်တယ် လှအောင်ပဲ၊ မင်းနဲ့ ငါဟာ ခုချင်းတူတူ၊ အခု တို့အသက် (၅၇) နှစ် ရှိကြပြီ၊ ဒါပေမယ့် မင်းအ႟ွယ်က ငါးဆယ်လောက်၊ ငါ့အ႟ွယ်က ခုနစ်ဆယ်လောက် ဖြစ်နေတယ်၊ မိုက်ပြစ် မိုက်ဒဏ် တွေပေါ့"
"တို့ သူငယ်ချင်းတွေ ရောက်လေရာမှာ မင်းကို သတိထား ရှာတယ် မတွေ့ဘူး၊ မင်း အကြောင်းကို တို့ ဆုံတိုင်း ပြောကြတယ်"
စာရေးသူက လှိုက်လှိုက်လှဲလှဲ ပြောလိုက်၏ ။
"အေး …. ငါတော့ မင်းတို့ အားလုံး နီးပါးကို မကြာခဏ တွေ့နေ တာပဲ၊ မင်းတို့ မိသားစု ဒီကို လာတာ ဒါနဲ့ ပါဆို ခြောက်ခေါက် ရှိပြီ၊ ငါ့ကို အားလုံးက တွေ့ကြ တာပဲ၊ ဒါပေမယ့် ဘယ်သူမှ မမှတ်မိ ကြဘူး၊ မှတ်မိ နိုင်စရာလဲ မရှိဘူး။"
"ငါကလဲ ဘယ်သူ့ ကိုမှ မခေါ်ဘူး၊ ဒီ အနေအထားနဲ့ ဒီလူတွေကို ဘယ်ပါးစပ်နဲ့ ခေါ်မလဲ၊ ခုလဲ မင်းကို ငါမခေါ် ချင်ဘူး၊ ငါးခေါက်လုံးလုံး အောင့်နေ ခဲ့တယ်၊ ခု …. မနေနိုင်လို့ ခေါ်တာ၊ ငါ့ကို ခွင့်လွှတ်ကွာ၊ စကားတခွန်း ပြောချင်လွန်းလို့ ခေါ်မိတာ"
"သူငယ်ချင်း …. မင်းကို ငါသူငယ်ချင်း လိုပဲ သဘော ထားတယ်၊ တောင်းပန် မနေနဲ့၊ လာ …. တို့ လက်ဖက်ရည် ဆိုင်မှာ သွား စကား ပြောရအောင်၊ ဒါမှ မဟုတ်ရင် ငါနဲ့ ရန်ကုန် လိုက်ခဲ့"
စာရေးသူက ဖြတ်ပြော လိုက်သည်။
"ဘယ်လက်ဖက်ရည် ဆိုင်ကမှ ငါ့ကို အထိုင်ခံမှာ မဟုတ်ဘူး၊ ရန်ကုန်လဲ မလိုက်ဘူး၊ မင်းတို့ ပြန်သွား တာနဲ့ ငါတခြား နေရာကို ပြောင်းတော့မယ်၊ ငါစကား တခွန်း ပြောချင် လွန်းလို့ ငါဖြစ်ကြောင်း အသိ ပေးရတာ၊ အခု ငါပြောချင်တဲ့ စကား ပြောပြီးပြီ၊ ငါကျေနပ်ပြီ"
"မင်း ပြောချင်တဲ့ စကားက ဘာလဲ"
စာရေးသူက နားမလည်စွာ မေးလိုက်သည်။
"စောစောက ငါပြောတဲ့ ကိုယ့်ကိုကိုယ် စွန့်ပစ်လို့ မရဘူး ဆိုတာလေ၊ ဒီစကားကို အဖေ ပြောတုန်းက မင်းနဲ့ ငါ နှစ်ယောက်ပဲ ကြားတယ်၊ အဲဒီတုန်းက ငါ့မျက်နှာကို အဖေ မြင်ရင် လည်ပင်း ထညၟစ် လိမ့်မယ်၊ အဖေ ပြောတာ ငါတကယ် မယုံခဲ့ဘူး၊ မင်းကိုတောင် ငါပြော သေးတယ်၊ လောကမှာ စည်းစိမ် မခံစား နိုင်တဲ့ အ႟ွယ် ရောက်ရင် သေပစ် လိုက်မယ်လို့။"
"ငါ သောင်းကျန်း တာနဲ့ စာရင် ငါ့လက်ရှိ ႟ုပ်ဘဝ အခြေအနေဟာ နည်းတောင် နည်းသေးတယ်၊ စည်းစိမ်ပျက်၊ ႟ုပ်ပျက် ကတည်းက ကိုယ့်ကိုယ်ကို စွန့်ပစ်ဖို့ သတ်သေဖို့ ကြိုးပမ်း ခဲ့တာ အကြိမ် တရာ မကဘူး၊ ဒါပေမယ့် သူရဲဘော ကြောင်ပြီး မအောင်မြင် ခဲ့ဘူး၊ ' အထုံ ရေစက် မပါလို့' ဆိုပြီး ပြောရင်လဲ ရတယ်။"
"ရယ်စရာ ပြောရရင် ငါ သိပ် နောင်တ ရတယ်၊ ဆင်းရဲလို့ မဟုတ်ဘူး၊ အဖေ့ စကားကို မထီမဲ့မြင် ပြုခဲ့ တာကို နောင်တ ရတာ၊ အဖေ့ကို ပြောချင်တယ်၊ 'ကဋ္ဋန်တော် မှားပါပြီ' လို့၊ ဒါပေမယ့် ဘယ်လိုက်ပြော မလဲ၊ ဒီတော့ နောင်တ ဆိုတာ အလကား ပဲလို့ ငါ မှတ်ချက် ချတယ်။"
"ဒါပေမယ့် မင်းကို တွေ့တဲ့ အခါမှာ 'နောင်တ ဆိုတာ အလကား မဟုတ်ဘူး' လို့ အတွေး ပေါက်ခဲ့ ပြန်တယ်၊ ဘာကြောင့်လဲ ဆိုတော့ ဟိုတုန်းက မင်း စာရေးတယ် ဆိုတာ သိထားဖူးလို့ မင်းနဲ့ တွေ့ရရင်၊ မင်းနဲ့ စကား ပြောရရင် အလကား ဖြစ်သွားတဲ့ ငါ့နောင်တဟာ လာလတ္တံ့သော လှအောင် လောင်းကလေးတွေ အတွက် တန်ဖိုး မဖြတ် နိုင်သော ပတ္တမြား ရတနာ ဖြစ်အောင် မင်း ဖန်တီး နိုင်လိမ့် မယ်လို့ ငါ ယုံကြည်တယ်၊ ဒါကြောင့် မင်းကို မျက်စိ မှိတ်ပြီး ဇွတ်ခေါ် လိုက်ရတာ။"
"ကဲ …. သွားတော့၊ မင်း မိသားစုတွေ မင်းကို မျှော်နေ ကြလိမ့်မယ်၊ မင်း ငါ့ကို ပြောစရာ ရှိသေးရင် ပြန် အဆင်းမှာ ပြော၊ ငါ ဒီက စောင့်နေမယ်"
လှအောင်က စကားရှည်ကြီး ပြောပြီး စာရေးသူအား နှင်လွှတ် လိုက်သည်။ စာရေးသူက မိသားစုများ စိတ်ပူ နေမည်ကို စိုးသည်က တကြောင်း၊ လှအောင် စောင့်နေဦးမည် ဆိုသည်က တကြောင်း တို့ကြောင့် လှအောင်အား မေးလိုသည့် အချက်အလက် များကို အပြန်မှ မေးမည်ဟု စိတ်ကူးပြီး ရင်ပြင်ပေါ်သို့ တက်လာ ခဲ့သည်။ ဘုရား ဖူးပြီး ပြန်ဆင်း လာသော အခါ လှအောင်အား အရိပ်အယောင် မျှပင် မတွေ့ရ တော့ပေ။
သြော် … နောင်တ ဆိုသည်မှာ အလကား ဆိုပေမယ့် ….
လှအောင်၏ နောင်တ ကိုမူ လှအောင်ကလေးများ အတွက် 'ပတ္တမြား' ဖြစ်ပါ စေသား ….။
စပယ်ဦး မြန်မာ ဝတဉုတို မဂ္ဂဇင်း
၁၉၈၉ ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလ။ စာအုပ် အမှတ် (၅၆)
စပယ်ဦး စာပေ ဖြန့်ချီရေးက ၂ဝဝ၅ ခု၊ စက်တင်ဘာ လမှာ ပထမ အကြိမ် ထုတ်ဝေ ဖြန့်ချီ ခဲ့တဲ့ စပယ်ဦး စာတည်း အဖွဲ့ဝင် တဦး စီစဉ်တဲ့ 'စပယ်ဦး လက်ေ႟ွးစင် မြန်မာ ဝတ္ထုတိုများ (၄)' က ချောင်းဆုံ အုန်းသွင်ရဲ့ "နောင်တ ဆိုသည်မှာ ပတ္တမြား" ကို ပြန်လည် ကူးယူ ဖော်ပြ လိုက်တာ ဖြစ်ပါတယ်။
Burmese Authorities Crack Down on Human Trafficking
A Burmese man was arrested for human trafficking o­n Sunday involving 200 Burmese migrant workers as part of the government’s anti-human trafficking operation in Kawthaung in southern Burma opposite Thailand’s Ranong Province.
The man was identified as Kyaw Win. No other details were available.
The crackdown, led by Brig-Gen Zaw Thein Myint of Military Operation Command, began last weekend with the cooperation of local police, Maung Tu,aresident in Kawthaung. told The Irrawaddy.
“The crackdown is still going o­n," he said. "The order came from Naypyitaw [Burma’s new capital]. They cracked down o­n the local resort and hotel as well.
“They [200 Burmese migrant workers] planned to leave from Kawthaung in early morning, but they were arrested when troops raided the resorts and hotels last night.” Maung Tu said that around 500 Burmese migrant workers cross the border everyday from Kawthaung to Thailand’s Ranong Province. Due to the crackdown, boat and ferry crossings have slowed, according to local sources.
Another Ranong resident said, “The [Burmese] government has lunched anti-trafficking campaigns yearly, but they're not really effective.” However, he said, “If they continue their crackdowns like this in the future, it would be effective. But we need to wait and see.”
The Burmese government has launched yearly anti-human trafficking crackdowns in Kawthaung since 2005. More than 400 people involved in human trafficking in Burma have been arrested, according to reports.
A US State Department report, “Trafficking in Persons," released o­n June 13 said the military government has not done enough to stop the flow of human trafficking, particularly of women and children.
The report said an increasing number of ethnic Burmese girls and women have been leaving Burma in hope of finding work. Children also have been trafficked to neighboring countries for sexual exploitation, forced labor and as indentured street beggars, according to the report.
In addition, Malaysian authorities o­n Sunday found two Burmese women in the trunk ofacar atanorthern Malaysian border checkpoint. The driver of the car,aThai police officer, was arrested, the Bangkok Post, an English language newspaper, reported o­n Monday.
The International Labor Organization's deputy regional director, Guy Thijs, recently told The Nation newspaper in Bangkok that many child workers are trapped in Thailand by human traffickers.
In December, Border patrol police in Tak found 41 Burmese men and women in the tank of an oil transport trailer without fresh air as they were being transported from Mae Sot to Bangkok.
Last year, about 740000 migrant workers from Burma registered with the Department of Employment in Thailand. Many more Burmese migrants are working illegally. About 70,000 Laotian and Cambodian migrant workers in Thailand are now registered with Thai authorities. An estimated 1 million Burmese migrant workers are working in Thailand.
အင်တာနက် Search Engine တစ်ခုဖြစ်တဲ့ Google ဟာ ကိုယ်ပိုင် Mobile Phone တီထွင်ထုတ်လုပ်တော့မယ်လို့ သိရပါတယ်။ ဥရောပတိုက်နိုင်ငံတွေရဲ့ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုတို့ကလာတဲ့ သတင်းတွေအရ အဲဒီ Mobile Phone ဟာ အင်တာနက်နဲ့ ချိတ်ဆက်ထားပြီး မြင်ကွင်းကျယ်ကျယ်ပြကွက်မှာ ရောင်စုံကြည့် နိုင်တဲ့ ဒီဇိုင်းဖြစ်ကြောင်း၊ စရိတ်စကနည်းနည်းနဲ့ ထုတ်လုပ်သွားမှာဖြစ်ကြောင်း သိရတယ်။ Google ရဲ့ ကိုယ်စားလှယ်တစ်ဦးကတော့ ဒီလိုဖုန်းမျိုး ထုတ်လုပ်ဖို့ စူးစမ်းနေဆဲပါလို့ ဆိုပါတယ်။ လွန်ခဲ့တဲ့ နှစ်လလောက်က Apple ကုမဍ္ဎဏီရဲ့ iPhone ကို လက်ကိုင်ဖုန်းဝါသနာအိုးတွေ သဘောကျစွဲမက်နေကြရာက အခုခါ Google က စရိတ်စကနည်းနည်းနဲ့ ထုတ်တော့မယ့် Mobile Phone ကို အာရုံစိုက်လာကြပါတယ်။
Bangkok Post/Today Magazine
Labels: Technology, သိပ္ပံနှင့်နည်းပညာ
[[Ref : Thailand outlook]]
Global interest rates: where to now?
Global interest rates are clearly on the rise. The move in the US 10-year treasuries over the past months is starting to grab headlines, spook investors and most importantly, confirm that rates are on the rise.
Numerous central banks including those in the UK, EU and Australia have increased interest rates. Just six months ago, investors were banking onaFed cut. Now the big question is, will chairman Ben Bernanke actually raise rates and if so, when?
Thailand, on the other hand, is coping with its own domestic problems such as lacklustre GDP growth, excess liquidity, low consumer confidence, political turmoil and occasional spurts of inflation. These factors, along with questionable leadership, have driven away foreign investment and depressed corporate earnings, contributed to poor performance by SET Index.
The Bank of Thailand (BoT) finally realised it needed to cut interest rates. Unfortunately, the damage was already done. The sad thing for investors is that this policy blunder caused investors to miss out on one of the biggest bull markets in Asian history.
Interest rates globally used to rise and fall in tandem, giving investors little opportunity to diversify their risk. What we see now, however, isatotally different dynamic with some central bankers increasing rates (Europe, Australia etc.) while others (Thailand, Indonesia and Brazil) are decreasing. Each country now stands on its own two feet independently.
Thailand isaclassic example proving the point that the Fed isn't the only central bank that we should be paying attention to.
Takingalook at global interest rates. There isahuge disparity between interest rates and central bank policies.
The range varies from 0.5% in Japan to 5.25% in the United States, 8.5% in Indonesia, all the way up to 17.25% in Turkey. Thailand, of course, is currently at 3.5% and many expect the BoT to cut rates further. Clearly, central bankers haveamuch more difficult job than they did in the 1980s or '90s. Maximum growth with low inflation guides current policy.
Due to the rise in commodities, housing prices and consumer items (primarily food), central bankers must now seek to tame inflation first, then worry about growth.
European interest rates are at six-year highs and are forecast to rise further in the next six months. US rates have gone from 1% in 2004 to 5.25% currently. US and European growth has been above average, but inflation has been the main concern.
But are higher interest rates really suchaterrible thing? Not at all. The mere fact that interest rates are rising indicates central bankers are trying to cool the economy. In fact, since 2004 the Fed has increased rates by 425 basis points - at the same time the Dow Jones has gone up by around 90%. Stronger economic growth leads to buoyant corporate earnings translating into higher stock prices.
When things getabit too hot, central bankers naturally step in to cool things down. As for Thailand, the recent cuts by the central bank will start to show benefits in the fourth quarter of of 2007 and well into 2008. ExpectaV-shaped recovery in corporate earnings with stock prices moving ahead as fund managers and investors buy stocks ahead of earnings upgrades.
On the other hand, most sceptics will say that higher interest rates will inflict pain on private-equity houses, force housing prices to retreat and most of all cause the China bubble to burst. As stated in previous columns, the only investors or strategists calling thisabubble are the ones who sold already or are not invested. Some are saying that the move of 50 basis points in the US 10-year bill will force private-equity houses to reconsider new investments due to higher costs of funding.I liken private-equity transactions to the high-end housing market - those at the top end in New York or Beverly Hills are selling just fine and will continue to sell in this environment. Bond bears will also tell you that interest rates are at their lowest level in 50 years. In the mid-1980s, rates were around 13% globally; in 2003, that number was just 3%. If rates do go back to 10% or more globally, there will be financial ruin for many.
Whether your view is one of bond bull or bear, hedging your interest-rate risk is no easy task. Products such as contract-for-differences, which provide access to global bond markets, are the most efficient and cost-effective way to access them.
Brian Hoegee is Managing Director, Asia, of Global Trader,aleading London-based derivatives provider registered with the Thai SEC. Contact him in Bangkok at 02 625 3120 or visit http://www.gt247.com.
Myanmar News:္ဘမိတ်ကဋ္ဋန်းစုရေူပင်အတငြ်ူးပည်ပမြ ရေမြော်မဵြိးစိတ်ကို စီးပြာူးဖစ်စိုက်ပဵြိးထုတ်လုပ်လိာိုံင်(Ref : Weekly Eleven Journal)
္ဘမိတ်ကဋ္ဋန်းစုရေူပင်အတငြ်ူးပည်ပမြ ရေမြော်မဵြိးစိတ်ကို စီးပြာူးဖစ်စိုက်ပဵြိးထုတ်လုပ်လိာိုံင်န္ဘေပီူဖစ်၍ ဒေသခံလုပ်ငန်းရင်ြမဵားအနေူဖင့်ရေူပင်အတငြ်းစီးပြာူးဖစ်
စိုက်ပဵြိး ရေးလုပ်ငန်းမဵားလုပ်ကိုင်ိုိံင်ရန် အလားအလာကောင်းမဵား ရိနြေေုကာင်းသိရသည်။ မူလနာမည်ူဖစ်သောEucheuma alvarezii Doty (ယူခီယိုးမား)ရေမြော် ပင်အမဵြိးအစားမဵားက္ဘိုမိတ်ကဋ္ဋန်းစု ရေူပင်ရြိ ဒုံးကဋ္ဋန်း၊ ဝၝးကဋ္ဋန်း၊ ကဋ္ဋန်း မြေႛယာ၊ ရြားအော်၊ ကာဒက်ဋ္ဌကီး၊ ဒုံး ပုလဲအောင်အနီး ရေူပင်မဵားတငြ် လာရောက်စမ်းသပ်စိုက်ပဵြိးခဲ့ရာဋ္ဌကီး ထြာိးံနြ်းလဵင်ူမန်္ဘပီးအရည်အသြေး ကောင်းမနြ်ေုကာင်းတြေႛရသူဖင့်ိုံင်ငူံခားကုမဍ္ဎဏီမဵားမြ လာရောက် စိုက်ပဵြိးလဵက်ရြိေုကာင်းသိရသည်။ ယင်းမဵြိးစိတ်ကိုဂဵပန်ိုံင်ငံမြ ယူ ဆောင်ခဲူ့ခင်ူးဖစ်သည်။ ""္ဘမိတ်ကဋ္ဋန်းစုရေူပင်မြာက လို အပ်တဲ့ဆားငန်ိံနြ်း အူပည့်ရိပြၝ တယ်။ ရေမြော်မဵြိးစိတ်စိုက်ပဵြိးဖိုႛ အ ကောင်းဆုံးနေရာလိုႛ ထင်ပၝတယ်။ အခုဆိုရင် ဒေသခံလုပ်ငန်း ရင်ြတြေ လည်း ရေမြော်မဵြိးစိတ်ကိုစိုက်ပဵြိးဖိုႛ စိတ်ဝင်စား လုပ်ဆောင်လာနေုက္ဘပီ"" ဟုဒေသခံလေ့လာသူတစ်ဦးကေူပာုကားခဲ့သည်။ ရေပေၞဋ္ဌကြိးတန်းမဵားတငြ် ဂ ရမ်၁၅၀အလေးခဵိန်ရြိ ပင်လယ်ရေ မြော်မဵြိးကိုင်းမဵားကို ခဵည်ြေိာံင်စိုက် ပဵြိးခဲ့ရာတစ်လုက္ဘာပီးနောက် ၁ဒသမ၅ မြ၂ဒသမ၀ကီလိုဂရမ် အ ထိဋ္ဌကီးထြားလာေုကာင်း သိရသည်။ ဖိလစ်ပိုင်ိုံင်ငံ၊ မလေးရြားအရြေႚ ပိုင်ူးပည်နယ်(ဆာဗား)ိံငြ့် အင်ဒို နီးရြာိးိုံင်ငံမဵားရြိ ကမ်းေူခရေူပင် မဵားသည်ရေမြော်မဵြိးစိတ်၏ မူရင်း ဒေသမဵာူးဖစ်ေုကာင်းသိရိရြသည်။ အရယ်ြအစားဋ္ဌကီးမားသောအသုံးဝင် ပင်လယ်ရေ မြော်မဵြိူးဖစ်္ဘပီး Kappa carageonin ခေၞ အရည်အသြေူးမင့် Phycocolloid ကိုထုတ်ယူရန်ထိုိုံင်ငံ မဵားတင်ြအမဵားအူပား စိုက်ပဵြိး ထုတ်လုပ်ကာစီးပြာူးဖစ် လဵက်ရြိေုကာင်းသိရသည်။ ပင်လယ်ရေမြော် ပင်ကိုတိုက်ရိုက်စားသုံူးခင်း၊ လက် သုပ်စာူးခင်းမဵာူးပလြုပ်ိုိံင်သလို Iodineူဖည့်ဆည်းပေိးိုံင်ူခင်း၊ လည်ပင်းဋ္ဌကီးရောဂၝပေဵာက်ကင်ိးိုံင်ူခင်း၊ အရည်အသြေူးမင့်မားသော Carragenan ကိုထုတ်ယူရန် အဆိုပၝ ရေမြော်မဵားကို စိုက်ပဵြိူးခင်ူးဖစ်ေုကာင်းသိရသည်။ Carrageenan ဆိုသည်မြာ Stach (ကော်)ကဲ့သိုႛသော Gel ၀တညပြင်္စည်ူးဖစ်ေုကာင်းသိရသည်။ အစားအစာ ထုတ်လုပ်ူခင်း၊ ဆေးဝၝးပင်္စည်းမဵား ထုတ်လုပ်ရာတငြ် စေးပစ်ပင်္စည်းအူဖစ်အသုံူးပ္ဘြပီး အလကြုန်ပင်္စည်း မဵားထုတ်လုပ်ရာတင်ြလည်း အသုံူးပြိုိံင်ေုကာင်းသိရသည်။ ထိုရေမြော်မဵြိးကိုမန်မာ့ရေူပင် တင်ြလုံးဝမတြေႚရိခြဲု့ကဘဲ၁၉၆၀ူပည့်ိံစ်ြခန်ႛကဖိလစ်ပိုင်ိုံင်ငံ၌ စတင်စမ်း သပ်စိုက်ပဵြိးခဲ့္ဘပီး ၁၉၇၁ ခိုံစ်ြတငြ် စီးပြာူးဖစ်ထုတ်လုပ်မြ အဆင့်ရောက် ခဲ့ေုကာင်းသိရသည်။ ထိုစီးပြာူးဖစ် စိုက်ပဵြိူးခင်းမဵားသည် ဖိလစ်ပိုင် တောင်ပိုင်းမတြစ်ဆင့် မလေးရြား၊ အင်ဒိုနီးရြား၊ ဗီယက်နမ်၊ တရုတ် တောင်ပိုင်း၊ ဟာဝိုင်အီ၊ ဖူဂဵီ၊ အာဖရိ ကအရြေႚပိုင်းတိုႛသိုႛ ရောက်ရိသြားခဲ့္ဘပီး ဂဵပန်ိုံင်ငံ Sua Marine Bio Logical Institute မတြစ်ဆင့်ူမန်မာ့ရေူပင် သိုႛ ယခုအခၝခဲယြူစိုက်ပဵြိးနေိုံင်္ဘပီူဖစ်ေုကာင်းသိရသည်။ ယခုလက်ရ္ဘြိမိတ်ကဋ္ဋန်းစုရေူပင်တငြ်MSC (ကိုရီး ယား)ိံငြ့် AIM (ူမန်မာ)ကုမဍ္ဎဏီမဵား မြ စိုက်ပဵြိးလဵက်ရိနြေ္ဘပီး MSC မငြၝး ဟက်တာ၊ AIM မတြစ်ဟက်တာစိုက် ပဵြိးထားကာ ရေစြည်အုန်းမလြည်း ဇာဒက်ဋ္ဌကီးကဋ္ဋန်းတငြ် ငၝးဟက်တာ စိုက်ပဵြိးထားေုကာင်းသိရသည်။ ရေ မြော်ပင်မဵားမြာစိုက်ပဵြိး္ဘပီးစမြ တစ်လ ခြဲုကာတင်ြရိတ်သိမ်ိးိုံင်္ဘပီး တိုင်စိုက် ဋ္ဌကြိးတန်းနည်း၊ ရေပေၞဋ္ဌကြိးတန်း နည်း၊ ပလတ်စတစ်ရေပုလင်းသုံ ရေ ပေၞဋ္ဌကြိးတန်းနည်း၊ တိုင်စိုက်ဋ္ဌကြိး တန်းဖောင်ဖြဲႚနည်း၊ ရေပေၞဖောင်ဖြဲႚ နည်းမဵာူးဖင့်စိုက်ပဵြိးုိံင်ေုကာင်း သိ ရသည်။ ရေမြော်ကိုတစ်ိံစ်ြပတ်လုံး စိုက်ပဵြိးုိံင်္ဘပီးလက်ရြိ ကမ္တာ့ဈေး ကက်ြတငြ် ရေမြော်အေူခာက်တစ် တန်လ္တွင် အမေရိကန်ဒေၞလာ ၆၅၀ ခန်ႛဈေးရိသြည်။ ရေပေၞဖောင်ဖြဲႚ နည်ူးဖင့်စိုက်ပဵြိးလ္တွင် မဵြိးကိုင်းအရေ အတကြ်ိံစ်ြသောင်းမြ သုံးသောင်း ထည့်စိုက်ိုံင်္ဘပီးတစ်ိံစ်ြအတငြ်း ရေ မြော်ကုန်ုကမ်းအေူခာက်၁၀ တန်မြ ၁၂တန်အထိထကြ်ိုံင်ေုကာင်း သိရ သည်။ ဇော်မိုးဦး (္ဘမိတ်)
A fire at Ranong Sapanpla Block on May 31 Evening. The building is next to Ranong - Kawthaung Jettey and the fire burned almost all apartments at that block.
The fire started quickly and burned rapidly that local firefighters are able to save nothing much when they arrived the scene. since the building is old(said 30 years ago.), combined with evening time, shop owners(mostly all of them are shops, some no residences off time) went out, and unluckily no rains (though always rain in that kind of months but not that evening.)
People said that one Burmese housemaid died by fire(though the police denied).
[[ Photo taken on June 1 2007, 6-7 am in the morning,anight after the fire]]
18 มิถุนายน 2550 10:05 น.
ตู้เย็นขนาดจิ๋วที่ใช้ไฟจากพอร์ตยูเอสบี ที่ทำให้คุณไม่ต้องลุกไปจากคอมพิวเตอร์เวลาหิวน้ำ สามารแช่น้ำได้ 1 กระป๋อง มีไฟLEDในตัว โดยมีอุณหภูมิอยู่ที่ประมาณ 8.5 องศาเซลเซียส หลังจากเริ่มใช้งาน5นาที ทั้งนี้ตู้เย็นยูเอสบีนี้ไม่ต้องใช้แบตเตอรี่ภายนอกแต่อย่างใด ด้วยขนาดประมาณ 19.4x9x9 เซนติเมตร น้ำหนัก 362กรัม สนนราคาอยู่ที่ 33 เหรียญ
Said that - This cool small refrigerator can store 1 can and can lower down its temperature to 8.5 degree celcius within5minutes after connecting power source from USB port. Price : 33 USD